08/26/13 ~ Myanmar Forward
Files တွေကို ဓာတ်ပုံအတွင်း ဖွက်ထား ( Hide ) လုပ်ပေးထားနိုင်မယ့် Software ( Files Hide To Photo )
Posted by drmyochit Monday, August 26, 2013, under နည်းပညာ | No comments
မည်သည့်ဖိုင်တွေကိုမဆို ဓာတ်ပုံအတွင်း Hide လုပ်ပေးထားနိုင်မယ့် Software ဖြစ်ပါတယ်..သုံးရတာလဲ လွယ်ကူပါတယ်...ဒီလို Software ကို Hacker တွေအများဆုံးအသုံးပြုကြပါတယ်..Virus ဖိုင်ကို ဓာတ်ပုံထဲကိုထည့်..ပြီးရင် ပစ်မှတ်ကို လှမ်းပေးလိုက်မယ်..ပစ်မှတ်ထားခံရသူက အဲဒီဓာတ်ပုံကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဓာတ်ပုံကတော့ပေါ်လာတယ်..ဒါပေမယ့် ဓာတ်ပုံထဲမှာ ကပ်ထည့်ထားတဲ့ Virus က ပစ်မှတ်ကိုထိသွားပြီ..:) ကဲဒါဆိုရင်ဘယ်လိုသုံးရလဲ သဘောပေါက်ကြမှာပါ..မိမိရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ဖိုင်တွေကိုလည်း ဓာတ်ပုံထဲမှာ
ကပ်ထည့်ပြီးလုံခြုံစိတ်ချစွာ မိမိသူငယ်ချင်းထံသို့ပေးပို့ ဝေမျှနိုင်ပါတယ်...ကပ်ထည့်ထားတဲ့ဖိုင်ကို ဖြေ
ထုတ်ဖို့ Extract Files ဆိုတာလည်းပါပါတယ်..သုံးရတာ တကယ့်လွယ်လွယ်လေးပါ..ကဲ ဒေါင်းနိုင်ကြပါပြီ
Download=> Link 1 / Link2/ Link3/ Link 4
Facebook ပေါ်က ကျောင်းသားများကို မြှူဆွယ်သည့် ဆရာမအား ဖမ်းဆီး
Posted by drmyochit Monday, August 26, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ဖလော်ရီဒါ၊ သြဂုတ် ၂၅
နာမည်ကျော် လူမှုကွန်ရက် တစ်ခုဖြစ်သည့် Facebook ကွန်ရက်ပေါ်က တစ်ဆင့် ကျောင်းသား များအား လိင်ကိစ္စ မြှူဆွယ်သော ဆရာမ တစ်ဦးကို တာဝန်ရှိသူများက ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်း USA Today သတင်းတွင် ဖော်ပြ ထားသည်။
ဖလော်ရီဒါ တောင်ပိုင်း အထက်တန်းကျောင်းတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသည့် အသက် ၃၁ နှစ် အရွယ်ရှိ စတီဗီဂလပ်စ်ပူး ဆိုသူသည် ဖလော်ရီဒါ ဘိုကာရေတန်ရှိ မိမိ နေအိမ်တွင် ကျောင်းသားများ မိမိနှင့်အတူ လာရောက် အိပ်စက်ရန် Facebook ပေါ်ကတစ်ဆင့် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည့်အပြင် မိမိထံတွင် ဆေးခြောက်များကိုလည်း သုံးစွဲနိုင်ကြောင်း ရေးသားထားသဖြင့် ထိုသို့ ဖမ်းဆီး အရေးယူရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဘရိုးဝပ် ရဲစခန်း တာဝန်ခံ အရာရှိက ပြောကြား သည်။
Facebook ပေါ်ရှိ သူမ၏ စာမျက်နှာပေါ်တွင် ဆရာမက အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၁၇ နှစ် အတွင်းဖြစ်ရမည် ဟူသော ရေးသားထားချက်များကို တွေ့ရပြီး ရဲစခန်းက လာရောက် ထိန်းသိမ်းလိုက်ရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ရဲအရာရှိက ဆိုသည်။
သူမသည် ကလေးသူငယ်များကို ပြည့်တာဆာဆန်ဆန် မြှူဆွယ်မှုဖြင့် လည်းကောင်း၊ လိင်ကိစ္စ မြှူဆွယ်လိုစိတ်ဖြင့် ကွန်ပျူတာ အင်တာနက်ကို သုံးစွဲသည့်အတွက် လည်းကောင်း လက်ရှိဒေါ်လာ ၂၅,၀၀၀ အာမခံဖြင့် နေထိုင်ရမည် ဖြစ်သည်။
အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသား တစ်ယောက်က မိမိထံ ဆရာမက ပို့လိုက်သော လိင်အသားပေး အရေးအသားများကို မိဘများထံ သွားရောက် ပြသလိုက်ပြီး မိဘများက တစ်ဆင့် အာဏာပိုင်များထံ ဆက်လက် တိုင်ကြားရာမှ ယခုကဲ့သို့ ကျော်မကောင်း ကြားမကောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် ကျောင်းသား တစ်ယောက်ထံသို့လည်း “မင်းငါ့ကို ပြန်ချစ်ဖို့ မမျှော်လင့်ပါဘူး။ ဒီလို ပြန်မချစ် လို့လည်း မင်းကို ရိုက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ စိတ်လည်း မဆိုးပါဘူး” ဟု ရေးသားထားသည့် စာများကိုပါ Facebook ကတစ်ဆင့် ပေးပို့ထားသည့် အထောက်အထားများ ရရှိခဲ့ကြသည်။
ဂလပ်စ်ပူးသည် မားဗရစ် အထက်တန်းကျောင်းက ဆရာမတစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ လွန်ခဲ့သည့် မေလ ကတည်းက အလုပ်မှ အထုတ်ခံထားရသူ ဖြစ်သည်။ ယခုလက်ရှိ သူမသည် ဟောလီးဝုဒ် ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံ အကယ်ဒမီ ကျောင်းတွင် ဆရာမအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ ဖြစ်သည်။ ယခုကိစ္စကို ကျောင်းဖွင့် သည့် စာသင်နှစ်အစ ကျောင်းလေးရက်သာ တက်ရသေးချိန်တွင် ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရဲစခန်းက သတင်း ထုတ်ပြန်သည်။
Autorun Virus Remover 3.3 Build 0328 Full Version (4MB )
ကဲ..လာပြီနော်.. USB Sitck ထဲကနေ ကွန်ပျူတာထဲသို့ Virus ၀င်မှာကြောက်သူများအတွက် အထူးစပါယ်ရှယ်ပါ..အရင် Version တွေနဲ့မတူဘဲ အခု Version အသစ်မှာ Tools အသစ်တွေပါဝင်လာပါတယ်.. ကွန်ပျူတာမှာ USB Stick တွေသုံးမရအောင် Lock ချထားချင်လား...ကွန်ပျူတာအတွင်းသို့ ထိုးလိုက်တဲ့ Virus ပါနေတဲ့ USB Stick ကို အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့
Safe Mode ကနေဖွင့်ကြည့်ချင်လား..USB Stick အတွင်း Virus ကိုက်သွားလို့ သုံးမရ..ဖွင့်မရ..ပျက်သွား
ပျောက်သွားတဲ့ဖိုင်တွေကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ် Repair လုပ်ချင်လား...စတဲ့ စတဲ့ USB နဲ့ပတ်သက်ရင် စွယ်
စုံအသုံးဝင်ဆုံး..လူတိုင်းလူတိုင်းဆောင်ထားဖို့ အကောင်းဆုံး USB Disk Security ထက် သာလွန်ကောင်း
မွန်တဲ့ Software လေးဖြစ်ပါတယ်..လိုအပ်သူများ Download ရယူနိုင်ကြပါပြီခင်မျာ..
Myanmar IT Helper ( www.mmithelper.com )
Full Version Softwares and Many Hacking Tips & Trick
ဓာတုလက်နက် ပြဿနာကြောင့် ဆီးရီးယားအရေး ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာ
ဆီးရီးယား နိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဓာတုလက်နက် အသုံးပြု တိုက်ခိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး အစိုးရနှင့် သူပုန်တပ်များ အပြန်အလှန် လက်ညှိုးထိုး စွပ်စွဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ် အတွင်းက ဒမတ်စကက် မြို့တော်အနီးတွင် လူပေါင်းရာနှင့်ချီ သေဆုံးစေသည့် ဓာတုလက်နက် အသုံးပြု တိုက်ခိုက်မှု တစ်ခုကို သမ္မတ ဘာရှာအာဆက်ဒ်၏ သစ္စာတော်ခံ တပ်ဖွဲ့များက ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း သူပုန်တပ်ဖွဲ့များက စွပ်စွဲခဲ့သည်။ ကုလသမဂ္ဂက အဆိုပါ အခြေအနေကို အလွန်စိုးရိမ်ကြောင်းနှင့် စုံစမ်းမှုများ ပြုလုပ်စေလိုကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခဲ့သည့်နောက် အမေရိကန်နှင့် ဥရောပ နိုင်ငံများကပါ ဆီးရီးယားအရေးကို ပိုမို အာရုံစိုက်လာခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ယခုအခါ ဆီးရီးယား အစိုးရက ယခုတိုက်ခိုက်မှုသည် သူပုန်တို့၏ လက်ချက်သာဖြစ်ကြောင်း တုံ့ပြန် စွပ်စွဲလာခဲ့သည်။
ကလေးငယ်များ၊ အမျိုးသမီးများ အပါအဝင် ရာပေါင်းများစွာ သေဆုံးခဲ့သော ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သူ့လက်ချက် ဖြစ်သည်ကို ကုလသမဂ္ဂက စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်လျှက် ရှိသည်။ အစောပိုင်းက အခင်းဖြစ်ရာ နေရာကို ဆီးရီးယား အစိုးရက သွားရောက် စုံစမ်းခွင့် ပိတ်ပင်ထားခဲ့ပြီး တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေပိုင်းကမှ အဆိုပါ ကိစ္စကို ခွင့်ပြုချက်ပေးရန် ကုလသမဂ္ဂ၏ တောင်းဆိုမှုကို လိုက်လျော သဘောတူညီခဲ့သည်။ ကုလသမဂ္ဂ အနေဖြင့် မိမိတို့၏ ဓာတုလက်နက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများသည် ယခုသီတင်းပတ် အစောပိုင်းတွင် စတင်၍ စုံစမ်းမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် မျှော်လင့်ထားသည်။ ဒမတ်စကက်မြို့တော် အစွန်အဖျား ဒေသများတွင် ဓာတုလက်နက်ဖြင့် တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း စွပ်စွဲမှုများအတွက် မည်သူ့တွင် တာဝန်ရှိသည်ကိုမူ ယတိပြတ် မပြောဆိုနိုင်သေးဟု ကုလသမဂ္ဂက ဆိုသည်။
လတ်တလောတွင် ဆီးရီးယား အရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ယခင်က အတန်ငယ် လက်ရှောင်လေ့ရှိသည့် အမေရိကန် အစိုးရသည် ဓာတုလက်နက် ပြဿနာနှင့် ပတ်သက်ပြီး သည်းခံလိုဟန် မရှိသည့် သဘောထားမျိုးကို ပြသလာခဲ့သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ ပင်တဂွန် စစ်ဌာနချုပ်သည် ဆီးရီးယားနိုင်ငံ အနီးသို့ ခရုစ်ဒုံးကျည်များ တပ်ဆင်ထားသည့် စစ်သင်္ဘော (၄)စင်းကို မြေထဲပင်လယ်ဒေသသို့ ပို့ဆောင်ထားလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ CNNသတင်းဌာနနှင့် အင်တာဗျူးတွင် အမေရိကန် သမ္မတ ဘာရတ်အိုဘားမားက လက်ရှိ အခြေအနေကို မိမိ အလွန်စိုးရိမ်ကြောင်း အတည်ပြု ပြောကြားသွားခဲ့သည်။
အိုဘားမားက "သိပ်ကိုဆိုးရွားတဲ့ ကိစ္စပါ။ ဒီအခြေအနေဟာ အမေရိကန်အတွက် အမျိုးသားရေးအဆင့် စိတ်ဝင်စားစရာ ပြဿနာမျိုး ဖြစ်လာပါတယ်။ လူတွေ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သေစေတဲ့ ဓာတုလက်နက်တွေ အသုံးပြုခဲ့တယ် ဆိုတာမျိုးက ဘယ်အခြေအနေမှာမှ လက်ခံလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ တစ်ဖက်မှာလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မဟာမိတ် နိုင်ငံတွေကို အကာအကွယ်ပေးဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ နောက်ပြီး အဲဒီဒေသတွင်းမှာ အခြေစိုက်တဲ့ အမေရိကန် စစ်စခန်းတွေ အတွက်ရောပေါ့"ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
ယခုအခါ အဆိုပါ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် နိုင်ငံတကာ အထောက်အပံ့ ရယူထားသည့် ဆီးရီးယား ဆေးရုံ (၃)ခုတွင် လူပေါင်း (၃၆၀၀)မျှ ကုသမှု ခံယူခဲ့ရသည်။ နောက်ဆုံးသတင်း ရရှိသည့် အခြေအနေထိ လူပေါင်း (၃၅၅)ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း သေဆုံးသူ စုစုပေါင်း အရေအတွက်သည် (၁၃၀၀)ကျော်မည်ဟု သတင်းများက ခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်။ ဆေးရုံရောက်နေသူ အများစုသည် ပြင်ပဒဏ်ရာ မရှိဘဲ အသက်ရှူ ခက်ခဲခြင်း၊ အာရုံကြော ထိခိုက်ခြင်းများကို ခံစားနေရသည်။
ရန်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဖြစ်သူ မိုဟာမက် ယာဗက်ဒ် ဇာရစ်ဖ်ကမူ ၎င်းသည် ဆီးရီးယား အစိုးရနှင့် ဆက်သွယ်စကားပြောခဲ့ကြောင်း ဆိုသည်။ "သူတို့ဘက်ကတော့ ခုတိုက်ခိုက်မှုဟာ သူတို့လက်ချက် မဟုတ်သလို ဓာတုလက်နက်ကို ဘယ်တုန်းကမှ မသုံးကြောင်း အခိုင်အမာ ပြောပါတယ်။ အနာဂတ်မှာ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ကျွမ်းကျင်သူတွေ အဲဒီနေရာကို သွားရောက် လေ့လာဖို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့လည်း အာမခံခဲ့တယ်"ဟု ယာဗက်ဒ်က ဝန်ကြီးဌာနပိုင် ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ကုလသမဂ္ဂ၏ လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေး ထိပ်တန်းအဆင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် အန်ဂျလာကိန်းသည် စနေနေ့က ဒမတ်စကက်သို့ ရောက်ရှိနေပြီး အစိုးရ အနေဖြင့် အဆိုပါ နေရာသို့ မိမိတို့ သွားရောက် စစ်ဆေးခွင့်အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်းထားသည်။ ဆီးရီးယား အစိုးရပိုင် ရုပ်မြင်သံကြား ဌာနတစ်ခုက ယခုဖြစ်စဉ်သည် အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့ဖြင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး သူပုန်တပ်များ၏ လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်း စွပ်စွဲခဲ့သည်။ ထို့အပြင် မြို့ထဲသို့ ပြန်ဝင်လာသည့် စစ်သားများစွာ အသက်ရှူ မွန်းကျပ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းလည်း ရုပ်မြင်သံကြား ဌာနတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
သူပုန်တပ်များကို အကြမ်းဖက်သမားများဟု သုံးနှုန်း ခေါ်ဝေါ်လေ့ရှိသည့် ဆီးရီးယား အစိုးရက "ယုံကြည်ရတာက အကြမ်းဖက်သမားတွေဟာ အဲဒီနေရာမှာ ဓာတုလက်နက်တွေ သုံးစွဲခဲ့ပုံရပါတယ်"ဟု ကောက်ချက်ချသွားသည်။ "ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ဘယ်တုန်းကမှ ဓာတုလက်နက်တွေ မသုံးခဲ့ဘူးဆိုတာ ထပ်ပြီး အတည်ပြုပါတယ်။ ဓာတ်ငွေ့ဖြစ်ဖြစ်၊ အရည်ဖြစ်ဖြစ်၊ တခြားဘာဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ လုံးဝ အသုံးမပြုခဲ့ပါဘူး"ဟု ဆီးရီးယား ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး အွမ်ရန်အယ်လ်ဇူဘီက လက်ဘနွန် ရုပ်မြင်သံကြား ဌာနနှင့် အင်တာဗျူးတွင် ပြောကြားသွားသည်။ ၎င်းကလည်း ယခုလက်ချက်သည် သူပုန်များ၏ အကွက်ချ စီစဉ်မှုဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။
အမေရိကန် အစိုးရကမူ သမ္မတအိုဘားမား အနေဖြင့် ယခုကိစ္စကို အလွန်စိတ်ဝင်စားနေကြောင်း ပြောကြားထားသည်။ အိမ်ဖြူတော် ပြောရေးဆိုခွင့်ရ အရာရှိ တစ်ဦးက "သမ္မတဟာ ထောက်လှမ်းရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေ အားလုံးကို သက်သေ အထောက်အထားတွေအတွက် ရသမျှ သတင်းအချက်အလက်တွေ စုဆောင်းဖို့ တိုက်ရိုက် အမိန့်ပေးထားပါတယ်။ ဆီးရီးယားမှာ ဘာတွေဖြစ်နေတယ် ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ သေချာသိချင်တယ်"ဟု AFPသို့ ပြောဆိုသွားသည်။ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဖြစ်သူ ချက်ခ်ဟေဂယ်လ်ကလည်း မိမိတို့၏ တိုက်ခိုက်ရေး တပ်ဖွဲ့များသည် သမ္မတ၏ အမိန့်ရသည်နှင့် အရာရာ လှုပ်ရှားရန် အဆင်သင့် ဖြစ်နေကြောင်း ဆိုသည်။
၎င်းက "သမ္မတက ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနကို ဖြစ်လာနိုင်သမျှ အခြေအနေတိုင်းအတွက် ပြင်ဆင်ထားပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က အဲဒီမတိုင်ခင် ကတည်းက အသင့်ဖြစ်ပြီးသားပါ။ မြေထဲပင်လယ်ထဲက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရေတပ်ဟာ အချိန်မရွေး လှုပ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဖြစ်နိုင်ခြေ အားလုံးအတွက် ကြိုပြီး လေ့ကျင့်ထားပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ သမ္မတက တစ်ခုခု ရွေးချယ်လိုက်ပြီဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က ချက်ချင်း အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ပါတယ်"ဟု သတင်းထောက်များအား ပြောကြားသွားသည်။
သြဂုတ် ၂၆ ရက် ညနေပိုင်းသတင်း
ဆီးရီးယားတွင် ကုလသမဂ္ဂစစ်ဆေးရေးမှူးများ၏ ယာဉ်တန်း စနိုက်ပါဖြင့် ပစ်ခတ်ခံရ
ဆီးရီးယားနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားသည့် ဓာတုလက်နက်ဖြင့် တိုက်ခိုက်မှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် ဒမတ်စကက်မြို့တော်သို့ ရောက်ရှိနေသော ကုလသမဂ္ဂစစ်ဆေးရေးမှူးများ၏ မော်တော်ယာဉ်တန်းမှာ စနိုက်ပါဖြင့် ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ် ခံခဲ့ရသည်။ စနိုက်ပါဖြင့် ပစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့် ပျက်စီးသွားသည့် မော်တော်ယာဉ်ကို လဲလှယ်ရန် ကုလသမဂ္ဂစစ်ရေးရေးမှူးများ အဖွဲ့သည် အစိုးရထိန်းချုပ်ရာ နေရာတစ်ခုကို ပြန်လှည့်ခဲ့ရသည်။ ၎င်းတို့သည် ဓာတုလက်နက်ဖြင့် တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ နေရာသို့ စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန် စီစဉ်သွားရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အစောပိုင်းကလည်း ကုလသမဂ္ဂစစ်ဆေးရေးမှူးများ တည်းခိုရာ ဟိုတယ်အနီး မော်တာကျည်ဆန် ၂ ခု ကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်း သတင်းများက ဖော်ပြသည်။
၁၂ နှစ်သမီးကို ခိုးပြေးမိ၍ အဓမ္မကျင့်မှုဖြင့် တရားစွဲခံရ
Posted by drmyochit Monday, August 26, 2013, under မှုခင်း | No comments
အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်အား ခိုးပြေးသူကို အရေးယူပေးရန် မိန်းကလေးငယ်၏ ဖခင်က တိုင်တန်းမှု တစ်ခုကို သင်္ဃန်းကျွန်းရဲစခန်းက သြဂုတ် ၂၄ ရက်က အမှုဖွင့်ထားကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
မိန်းကလေးငယ်သည် တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ဦးထုပ်ချုပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် အလုပ် လုပ်ကိုင်နေ သူဖြစ်ပြီး သြဂုတ် ၇ ရက်က နေအိမ်မှ အလုပ်သို့ ထွက်ခွာသွားသော်လည်း ညဘက်တွင် အလုပ်ရှင်က သူမ အ လုပ်လာမဆင်းကြောင်း မိဘများထံ ဖုန်းဖြင့်အကြောင်းခဲ့သည်ဟု မှုခင်းမှတ်တမ်းတွင် တွေ့ရသည်။
ထို့ကြောင့် ဖခင်က လိုက်လံရှာဖွေခဲ့ရာ နှစ်ရက်ကြာသည်အထိ မတွေ့ရသဖြင့် သူ့သမီးပျောက်သည့် အမှုကို တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ရဲစခန်းတွင် လူပျောက်မှုဖြင့် တိုင်တန်းအမှုဖွင့်ခဲ့ပြီး ဆက်လက်ရှာဖွေ နေခဲ့သည်ဟု ရဲဌာန၏ မှတ်တမ်းတွင် တွေ့ရသည်။
မိန်းကလေးငယ်အိမ်မှ ပျောက်သွားပြီး ၁၄ ရက်အကြာ သြဂုတ် ၂၃ ရက် နံနက်တွင် သူ့မိဘများကို ဒဂုံဆိပ်ကမ်း မြို့နယ်မှ အမျိုးသားကြီးတစ်ဦးက ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ပြီး သူ့သားနှင့်အတူ သူ့အိမ်တွင် မိန်းကလေးငယ်ရောက်ရှိ
နေကြောင်း အကြောင်းကြားလာသဖြင့် ဖခင်က သွားရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ သည်ဟု ဆိုသည်။
မိန်းကလေးငယ်က ၎င်းကို ကျိုက္ကဆံဘုရားတွင် တွေ့ဆုံခဲ့ဖူးသည့် မောင်ဩဩဩ..က အလုပ်သွားရာ လမ်းတွင် စက်ဘီးဖြင့် စောင့်ကြိုနေပြီး ဖျားယောင်းသွေးဆောင်၍ သူ့နေအိမ်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားကာ သားမယားပြုကျင့် ခဲ့ကြောင်း ဖခင်ဖြစ်သူကို ပြန်ပြောပြသည်ဟုလည်း ရဲမှတ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
မိန်းကလေး၏ ဖခင်ကလည်း မောင်ဩဩဩကို သြဂုတ် ၂၄ ရက်၌ သင်္ဃန်းကျွန်းရဲစခန်းတွင် တိုင်တန်းလိုက်ပြီး ရဲစခန်းက အမှုအမှတ်(ပ) ၃၅၃/၂၀၁၃ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားသည်ဟု တိုင်းရဲဌာနက ဆိုသည်။
မိန်းကလေးကို ခိုးပြေးပြီး ပေါင်းသင်းနေထိုင်ခဲ့သူကိုမူ ရဲဌာနက စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပြီး ဖမ်းမိပါကလည်း သူ့ကို ပြစ်မှု ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၇၆ အဓမ္မကျူးလွန်မှုဖြင့် တရားစွဲနိုင်ချေရှိသည်ဟု တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့၏ သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွင် ပါရှိသည်။
ဇော်ဇော်ထွေး | မဇ္ဈိမ
Posted by drmyochit Monday, August 26, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
ရွှေပြည်သာ၊ သြဂုတ် ၂၆။
ရွှေပြည်သာမြို့၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ချင်းတွင်းလမ်းရှိ သဲချောင်း ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ယမန်နေ့က သံဃာတော်တစ်ပါး ဆွဲကြိုးချသေဆုံးခဲ့ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်းမှ သိရသည်။
ယင်းကျောင်းတွင် တစ်ပါးတည်း သတင်းသုံး နေထိုင်သော ဝါတော် ဆယ်ဝါရှိ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဦးဗုဒ္ဓဝံသ၊ အသက်(၃၀)သည် ကျောင်းတိုက်အောက်ထပ်၊ ၎င်းနေထိုင်သည့် အခန်းအတွင်း
အမြင့်ရှစ်ပေကျော်ရှိ ထုတ်တန်းတွင် အရှည်ကိုးပေခန့်ရှိသော အေကသီ သင်္ကန်းစအား ကြိုးအဖြစ် အသုံးပြု၍ မတ်တပ်ရပ်ဆွဲကြိုးချ သေဆုံးနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သေမှုသေခင်း မှတ်တမ်းများအရ
အဆိုးပါရုပ်ကလပ်အား အင်းစိတ်ဆေးရုံတွင် ပီအာရ် ၁၇/၁၃ဖြင့် လက်ခံထားရှိပြီး ဓမ္မတာအတိုင်း သေဆုံးခြင်း ဟုတ်/မဟုတ် စစ်ဆေးနိုင်ရန် ဒုရဲအုပ် မျိုးမင်းကျော်မှ တရားလိုပြုလုပ်တိုင်တန်းမှုအား
ရွှေပြည်သာ မြို့မှ ရဲစခန်းမှ သေမှုသေးခင်း အမှတ်စဉ် ၁၇/၁၃ဖြင့် အမှုဖွင့်၍ စခန်းမှူးဖြစ်သူ အမှုစစ်ဒုရဲမှူးဦးဌေးအောင်မှ စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
အိန္ဒိယ ဓာတ်ပုံ သတင်းထောက် မိန်းကလေးကို အုပ်စုဖွဲ့ မုဒိမ်းကျင့်သူများ အကုန် ဖမ်းမိ
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ အမျိုးသမီးများ၏ ဘဝ လုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး မကျေနပ်မှုများ မြင့်တက်လာစေသည့် နောက်ထပ် လိင် အကြမ်းဖက်ခြင်း ရာဇဝတ်မှု တစ်ခုဖြစ်သော ဓာတ်ပုံ သတင်းထောက် အမျိုးသမီး ငယ် တစ်ဦးကို အုပ်စုဖွဲ့ မုဒိမ်းကျင့်မှု ကျူးလွန်သူများ အားလုံးကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးလိုက်နိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း AFP သတင်းတစ်ရပ်က ဖော်ပြထားသည်။
“ကျွန်တော်တို့ ရာဇဝတ်မှု တိုက်ဖျက်ရေး ဌာနက နယူးဒေလီကနေ ငါးယောက်မြောက် ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူကို ဖမ်းမိပြီ ဖြစ်လို့ မွန်ဘိုင်းကို ပြန်ခေါ်လာပြီ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု အမည် ဖော်လိုခြင်း မရှိသော အစိုးရအရာရှိ တစ်ဦးက AFP ကို ပြောကြားခဲ့သည်။
အသက် ၂၀ စွန်းစွန်းသာ ရှိသေးသော အဆိုပါ ဓာတ်ပုံသတင်းထောက် မိန်းကလေးငယ်ကို လူငါးဦး ပါသော အုပ်စုက မွန်ဘိုင်းမြို့ ဈေးရပ်ကွက်တွင် အဓမ္မ ပြုကျင့်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ရဲအရာရှိများက ဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလကလည်း နယူးဒေလီမြို့တော်တွင် ဘတ်စ်ကားပေါ်၌ အသက် ၂၃ နှစ် အရွယ် ကျောင်းသူ တစ်ဦးကို အုပ်စုဖွဲ့ မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့သောကြောင့်လည်း အဆိုပါမိန်းကလေး သေဆုံးခဲ့ရသည်။
အိန္ဒိယတွင် လူထုကလည်း ယင်းရာဇဝတ်မှုများကြောင့် အမျိုးသမီးများ ဘဝ လုံခြုံရေးအတွက် အစိုးရကို ဒေါသတကြီး ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
တရားခံများကို ရက်ခြားစီ ဖမ်းမိခြင်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် မြို့တော် မွန်ဘိုင်း၌ ချုပ်နှောင်ကာ စစ်ဆေးလျက် ရှိသည်။
တရားခံများတွင် အသက် ၁၆ နှစ် အရွယ် လူငယ် တစ်ဦးပင် ပါဝင်သည်ဟု သတင်းများက ဖော်ပြထားပေသည်။
မုဒိမ်းမှု သားကောင် ဖြစ်ခဲ့ရသော ဓာတ်ပုံ သတင်းထောက် အမျိုးသမီးငယ် သည် လက်ရှိအချိန်တွင် မွန်ဘိုင်းရှိ ဂျက်စ်လော့ခ် ဆေးရုံတွင် တင်ထား ကုသမှု ခံနေရပြီး ၎င်း၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေသည် အလွန်ကောင်းမွန် တည်ငြိမ်လာလျက် ရှိသော်လည်း ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်များစွာ ရရှိထားသည် ဟု ဆေးရုံ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများက ဆိုသည်။
မိန်းကလေးသည် မွန်ဘိုင်းမြို့ ဘဏ္ဍာရေး ဈေးကွက်အနီးရှိ အသုံးမပြုတော့သော စက်ရုံကြီး တစ်ခုကို ဓာတ်ပုံရိုက်ရန် တာဝန်ပေးခံရပြီး အမျိုးသား အဖော်တစ်ဦးနှင့်အတူ သွားရောက် ရိုက်ကူးစဉ် ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူများ ရောက်ရှိလာပြီး အမျိုးသား အဖော်ကို ကြိုးတုပ်ကြကာ ဓာတ်ပုံ သတင်းထောက် အမျိုးသမီးငယ်ကို သားမယား ပြုကျင့်ခဲ့ ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
အိန္ဒိယတွင် လူထုက ဖိအားပေး တောင်းဆိုသောကြောင့် မုဒိမ်းမှုသည် လူသေပါက သေဒဏ် ပေးခံရနိုင်သည်အထိ ပြင်းထန်သွားခဲ့ပြီး လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာအရ စော်ကားမှု ပြုခြင်းဆိုသည့် အဓိပ္ပာယ်သည်လည်း ပိုမို ကျယ်ဝန်း လာသည်။
ကွန်ပြူတာပညာအခမဲ့ သင်ပေးမည့် ပရဟိတသူရိယဖောင်ဒေးရှင်းစလှုပ်ရှား
မိုးညှင်း၊ သြဂုတ် ၂၆။
ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးညှင်းမြို့ ပုညရှင်တောရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ၀ိပဿနာရိပ်သာ ဆရာတော် ဒေါက်တာအရှင်ကစ္စာယနမှ ဦးစီးသော သူရိယပညာရေး ဖောင်ဒေးရှင်းမှ လရွယ်၊ လူငယ်များ ကွန်ပျူတာ အခမဲ့ သင်ကြားနိုင်ရန် စတင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ယင်းဖောင်ဒေးရှင်းမှ သိရသည်။
အသက်(၃၀)အောက် အိမ်ထောင်မရှိသော လူငယ်များ(၁၀၀)ကျော်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ဆင်းရဲသား၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ လူငယ်များအားလုံး ကွန်ပြူတာ အခမဲ့ ပညာသင်ကြားနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ကြောင်း ၎င်းဖောင်းဒေးရှင်းမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
“မြန်မာလူမျိုးတွေက နိုင်ငံခြားသားတွေနဲမတူဘူး၊ ဥာဏ်ကောင်းကြတယ်။ နိုင်ငံတော်က ပညာရေးအတွက် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေ လုံလောက်အောင် မပေးနိုင်လုိ့သာ ခေတ်နောက်မှာ ရောက်နေကြတာ။ ဒါကိုတစ်ဖက်တလမ်း ကူညီချင်လို့ ကွန်ပြူတာပညာရေးမြင့်တင်တဲ့ အနေနဲ့အခမဲ့ သင်ကြားပေးနိုင်ဖို့ ပရဟိတလူငယ်တွေကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်ကစ္စာယနက မိန့်ကြားသည်။
လူငယ်ကျား၊ မပေါင်းလူဦးရေ(၁၀၀)ဖြင့်(၇)ဖွဲ့ ခွဲထားပြီး လစဉ်(၁၀၀၀)ကျပ် ထည့်ဝင်ခြင်းဖြင့် ရံပုံငွေရှာကာ တ၀က်ကို ဆင်းရဲတဲ့ကျောင်းများ ကိုလှူမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျောင်းသုံးစာအုပ်များနှင့် လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျန်တစ်ဝက်ကို လူမျိုးဘာသာမရွေး သင်ယူနိုင်သည့် အခမဲ့ကွန်ပြူတာသင်တန်း ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် လှူမည်ဖြစ်ကြောင်း ပရဟိတ သူရိယဖောင်ဒေးရှင်းမှ ကိုဇင်းမင်းထက်က ပြောသည်။
“ဆင်းရဲတဲ့ကျောင်းတွေမှာ အဟာရဓာတ်စာတွေ ကျွေးကြတယ်။ ဆေးရုံတွေမှာ လူနာတွေအတွက် သွေးလှူရှင်တွေရှာပြီး ကူညီပေးတယ်။ သန့်ရှင်းရေးကအစ လူငယ်တွေ လုပ်အားပေးကြတယ်။ ကွန်ပြူတာ မတတ်မြောက်ကြတဲ့ လူငယ်တွေ အတော်များပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်မှာ မူးယစ်ဆေးဝါးပေါတဲ့ နေရာဖြစ်နေလို့ ဆေးသုံးစွဲမှုဘက်မှာ လူငယ်တွေ အာရုံမရှိစေဘဲ ကွန်ပြူတာသင်တန်းတက်ပြီးနိုင်ငံတော်ကို အကျိုးပြုနိုင်ကြစေလိုတဲ့ ဆန္ဒနဲ့ လုပ်ဆောင်နေတာပါ”ဟု ၎င်းကဆက်လက် ပြောကြားသည်။
ပရဟိတအကျိုးဆောင်ကြသည့် လူငယ်အဖွဲ့များရှိသင့်ပြီး မိမိမြို့ရပ်ရွာများ၏ အခက်အခဲများကို တနိုင်တပိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းသည် အကျိုးကျေးဇူးများသည်ကို တွေ့ရကြောင်း၊ မိုးညှင်းတွင် ပရဟိတအခမဲ့ ကျောင်းများနှင့် ပရဟိတသူရိယ ဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ ရှိလာခြင်းသည် မြို၏ အနာဂါတ်ကောင်းစားတော့မည်ကို မြင်နေရကြောင်း ဒေသခံ ကိုသန်းထွန်းက ဝမ်းသာစကားဆိုသည်။
အရွယ်မရောက်သေးသူအား ကားသမားသုံးဦးဖြင့် ကာမစပ်ယှက်ခိုင်းသူ သုံးဦးကို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေး၊ ကျန်ရှိသူအား စုံစမ်းနေ
ဒဂုံဆိပ်ကမ်း၊ သြဂုတ် ၂၆။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ (၉၃)ရပ်ကွက် ရှုခင်းသာပတ်လမ်းတွင် နေထိုင်သော အသက်(၁၅)နှစ်ခန့် အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦးအား အိမ်နီးနားချင်းပါ သုံးဦးမှ ခေါ်ဆောင်သွားပြီး
ကားသမား သုံးဦးဖြင့် ကာမစပ်ယှက်ခိုင်းသဖြင့် မိခင်ဖြစ်သူက သမီးဖြစ်သူအား သွေးဆောင်၍ အခကြေးငွေဖြင့် ကာမစပ်ယှက်ခိုင်းသူများအား အရေးယူပေးရန် တိုင်တန်းထားသဖြင့် ဒဂုံဆိပ်ကမ်း
မြို့မရဲစခန်းမှ နှစ်ဦးအား ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးလျက်ရှိပြီး ကျန်တစ်ဦးအား ဖမ်းမိရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်းမှ သိရသည်။
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ (၉၃)ရပ်ကွက်၊ ရှုခင်းသာပတ်လမ်းတွင် နေထိုင်သော ဒေါ်သီတာချို၊ ဆိုင်ကယ်မောင်းတစ်ဦးနှင့် အရွှေဝတ်မှုံတို့ သုံးဦးသည် အရွယ် မရောက်သေးသော အသက်(၁၅)ခန့်ရှိ
အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦးအား သြဂုတ်လ ၂၃ရက်နေ့က ခေါ်ဆောင်သွားကာ ပဲခူးမြစ်ကမ်း၊ ကနောင်ကွေ့မှတ်တိုင် အနီးတွင် ရပ်ထားသော နောက်တွဲမပါ ကွန်တိန်နာတင်ယာဉ် ခေါင်းခန်း အတွင်းသို့
ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီး ယာဉ်မောင်းသုံးဦးဖြင့် ကာမစပ်ယှက်ရန် ထားခဲ့ကြောင်း (၂၄)ရက်နေ့ တွင် ပြန်ရောက်လာသော အဆိုပါ မိန်းကလေးထံမှ မိခင်ဖြစ်သူက သိရှိခဲ့ပြီး ဒဂုံဆိပ်ကမ်း မြို့မရဲစခန်းသို့ တိုင်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း မှုခင်းမှတ်တန်းများ အရ သိရသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့မ ရဲစခန်းမှ (ပ)၂၉၁/၁၃၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၆၆-က ဖြင့် ယမန်နေ့က အမှုဖွင့်ခဲ့ပြီး အမှုစစ် ဒုရဲအုပ် ဝဏ္ဏမောင်မောင်မှ ဒေါ်သီတာချိုနှင့်တစ်ဦးအား ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးလျက်ရှိပြီး ကျန်တစ်ဦးအား ဖမ်းဆီးရမိရေး စုံးစမ်းလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ယမန်နေ့က အရက်အလွန်အကျွံသောက်၍ ရေမြောင်းအတွင်း ပြုတ်ကျသေဆုံးသူ(၃)ဦးရှိ
ရန်ကုန်၊ သြဂုတ် ၂၆။
ယမန်နေ့က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြို့နယ်သုံးခုတွင် အရက်အလွန်အကျွံ သောက်၍ ရေမြောင်းအတွင်း ပြုတ်ကျ သေဆုံးသူ (၃)ဦးရှိခဲ့ကြောင်း တိုင်းဒေသကြီး မှုခင်းမှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။
မြောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် (ဌ)ရပ်ကွက် ဆိုက်ကားတဲ အနောက်ဘက်တွင်တစ်ဦး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ (ထ/၁၆)ရပ်ကွက်၊ မဟာဗန္ဓုလမ်းဘေးရှိ ရေမြောင်းအတွင်းတစ်ဦးနှင့် လှည်းကူးမြို့နယ်၊ ရိပ်သာရပ်ကွက်၊
ရိပ်သာ (၆)လမ်းနှင့် မြို့အုပ်စာ(၁)လမ်းထောင့်ရှိ ရေးမြောင်းအတွင်းတွင်တစ်ဦး အရက်အလွန်အကျွံ သောက်သုံး၍ သေဆုံးနေကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရဲမှတ်တမ်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းသို့သေဆုံးသော အလောင်းများအား ၎င်းတို့သေဆုံးရာ မြို့နယ်ရှိ ဆေးရုံကြီးများတွင် သက်ဆိုင်ရာ ပီအာရ် အမှတ်စဉ်များဖြင့် လက်ခံထားရှိပြီး ဓမ္မတာအတိုင်း သေဆုံးခြင်းဟုတ်/မဟုတ် စစ်ဆေးနိုင်ရန် မြောက်ဥက္ကလာမမှ မှုခင်းအား ဒုရဲအုပ် ဇင်မင်းထွန်းမှ တရားလိုပြုလုပ် တိုင်တန်း၍ ဝေဘာဂီ မြို့နယ်စခန်းတွင် သေမှုသေခင်းအမှတ်စဉ် ၆/၁၃ဖြင့် အမှုဖွင့်၍ စခန်းမှူး ရဲအုပ်နိုင်ဝင်းလည်းကောင်း၊ လှော်ကားမြို့နယ်မှ မှုခင်းအား ဒုရဲအုပ်သန်းအုန်း တရားလို ပြုလုပ်၍ လှော်ကားမြို့နယ် စခန်းတွင် သေမှုသေခင်းအမှတ်စဉ် ၁၁/၁၃ဖြင့် အမှုဖွင့်၍ အမှုစစ် ရဲအုပ်တင့်နိုင်မှ လည်းကောင်း၊ လှည်းကူးမြို့နယ်မှ ယင်းမှုခင်းအား ဒုရဲမှူး မြင့်ဦးမှ တိုင်တန်းပြီး လှည်းကူး မြို့မ ရဲစခန်းတွင် သေမှုသေခင်း အမှတ်စဉ် ၁၇/၁၃ဖြင့် အမှုဖွင့်၍ အမှုစစ်/တရားလိုမှ လည်းကောင်း အသီးသီး စစ်ဆေးလျက်ရှိကြကြောင်း သိရသည်။
လက်မထပ်နိုင်ကြောင်းငြင်းသောအမျိုးသမီး၏ ရင်အုံကို ရည်းစားဟောင်းက ဓားဖြင့်ထိုး
ရန်ကုန်မြို့၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သူ အမျိုးသမီး၏ ဝဲဘက်ရင်အုံကို ရည်းစား ဟောင်းဖြစ် သူက ဓားဖြင့်ထိုးခဲ့သော မှုခင်းတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း တိုင်းဒေသကြီး မှုခင်းမှတ်တန်း များအရ သိရသည်။
ကမာရွတ်မြို့နယ် (၃)ရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်သော အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား တစ်ရပ်ကွက်ထဲနေသူ ယခင်ရည်း စားဟောင်း ဖြစ်ခဲ့ဘူးသူက အရေးကြီးစကား ပြောစရာရှိ၍ ၎င်းအိမ်သို့လိုက်ခဲ့ရန်
ခေါ်ပြီးနောက် ပတ္တမြားလမ်းနှင့် မီးရထား လမ်းကြားတွင် စကားပြောစဉ် လက်ထပ်ရန်ပြောသဖြင့် အဆိုပါအမျိုးသမီးက ငြင်းလိုက်ရာ ရည်းစားဟောင်းဖြစ်သူက ဝဲဖက်ရင်အုံအောက်သို့
စာရွက်ဖြတ်သော အဆစ်ဓားဖြင့် ထိုးလိုက်ရာ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် အတွင်းလူနာ(စိုးရိမ်ရ) အဖြစ် တင်ထားရကြောင်း ဆက်လက်သိရသည်။
ယင်းအမှုအား ကမာရွတ်မြို့မ ရဲစခန်းမှ (ပ)၃၇၉/၁၃၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ-၃၂၆ဖြင့် ယနေ့ နံနက် (၀၀း၃၀)အချိန်တွင် အမှုဖွင့်၍ အမှုစစ် ဒုရဲအုပ် ဟန်ထွန်းအောင်မှ တရားခံဖမ်းဆီး စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝန်း အင်တာနက် အသုံးပြုနိုင်မည့် Internet.org အဖွဲ့ကို Zuckerberg ဖွဲ့စည်း
ကမ္ဘာပေါ်တွင် နေထိုင်သူမည်သူမဆို အင်တာနက်အသုံးပြုရန်အတွက် Samsung Electronics, Nokia, Qualcomm နှင့် အခြားကုမ္ပဏီများ ပူးပေါင်းပါဝင်သော အဖွဲ့တစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းမည်ဖြစ်ကြောင်း Facebook အမှုဆောင် အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ Mark Zuckerberg က ၎င်း၏ Facebook profile တွင်ကြေညာပြောကြားခဲ့သည်။
Internet.org ဟုခေါ်သည့် အဆိုပါ အဖွဲ့ကို ကမ္ဘာပေါ်တွင် အင်တာနက် အသုံးမပြုနိုင်သည့် လူဦးရေ ၅ ဘီလီယံအတွက် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း သိရသည်။ လက်ရှိတွင် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ သုံးပုံတစ်ပုံခန့်သာ အင်တာနက် အသုံးပြုနိုင်သေးကြောင်း ဆိုသည်။
လက်ရှိတွင် Facebook သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မည်သူ့ကိုမဆို ဆက်သွယ်ပေးနေကြောင်း၊ သို့ရာတွင် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၌ ဆက်သွယ်မှု ပြုလုပ်ရာတွင် ကြီးမားသည့် အတားအဆီးများရှိကြောင်း၊ Inter net.org မှာ အဆိုပါ စိန်ခေါ်မှုများကို ကျော်လွှားနိုင်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် နိုင်စေမည်ဖြစ်ကြောင်း Zuckerberg က၎င်း၏ timeline တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
Internet.org တွင် Ericsson, MediaTek နှင့် Opera ကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီများပါဝင်ပြီး ၎င်းအဖွဲ့သည် စီမံကိန်းများဖွံ့ဖြိုးရန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အသိပညာဝေမျှခြင်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အစိုးရများကို ကမ္ဘာ့အွန်လိုင်းတွင် ပါဝင်ရန် စည်းရုံးခြင်း စသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း Zuckerberg ကပြောကြားခဲ့သည်။
အတွဲ (၁၄)၊ အမှတ် (၃၃)
ဆီရီးယား ပြည်တွင်းစစ် ဓာတုဗေဒ စစ်လက်နက်တွေ ပါကုန်ပြီ
မနေ့ညလေးတင် Resident Evil အမည်ရ ဂိမ်းအခြေခံ Animation ရုပ်ရှင် ကို ကြည့်ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ဆိုဗီယက်ကွဲထွက်နိုင်ငံ တစ်ခုရဲ့  ပြည်တွင်းစစ်ကို အခြေခံပြီးဓာတုဗေဓ လက်နက် အသုံးပြု နေကြတာကို မြင်တွေ့ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယခု တကယ့် အပြင်မှာ သုံးနေပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့က စပြီး ဆီရီးယား ပြည်တွင်းစစ်မှာ ဓာတုဗေဒ စစ်လက်နက်တွေ အသုံးပြုနေပြီ ဖြစ် ပါတယ်။
သုံးတာမှ နယ်စွန်မှာမဟုတ်ပဲ မြို့ တော် Damascus အနီးတစ်ဝိုက်မှာ ဖြစ်ပြီး တစ်ရက်တည်း အပြစ်မဲ့ ပြည်သူ ၁၃၀၀ ကို သေစေ ခဲ့ပါတယ်။ ၂၁ ပြီးတော့ ယနေ့အထိ တိုက်ပွဲအချို့ မှာ အသုံးပြုနေကြပြီး လူသေ နှုန်း ယခင်ကထက် ဆပွားတိုက် တက်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်မတန်ဆိုးရွားတဲ့ ဓာတုဗေဒ လက်နက်တစ်မျိုးဖြစ်တာမို့ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံကြီး များလည်း ရပ်ကြည့်နေလို့ မရတော့ပါဘူး။ ဘန်ကီမွန်းစေလွတ်တဲ့ စစ်ဆေး ရေးအဖွဲ့တစ်ခု ဆီးရီးယားကို ရောက်နေပါပြီ။ ဘယ်လို ဓာတုဗေဒ လက်နက် ဖြစ်တယ်။ ဘယ်ဘက်က အသုံးပြုတယ်ဆိုတာကို ကွဲကွဲ ပြားပြား သိအောင် စစ်ဆေးနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆီရီးယား အစိုးရဘက်မှ မဟုတ်ပဲ အတိုက်အခံ သူပုန်များ ရဲ့  အသုံးပြုမှုလို့ အများစု သိထားကြပြီး သေဆုံး သူ ဘက်ကတော့ ဆီးရီးယား အစိုးရသစ္စာခံတပ်နဲ့ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
တိုက်ပွဲတွေ အင်မတန်ပြင်းထန်နေပါတယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လက စတင်တဲ့ ယင်းတိုက်ပွဲကြောင့် ဆီးရီး ယားမှာ သေဆုံးသူ ၁ သန်းနီးပါး ရှိသွားပါပြီ။ ၁.၇ သန်းသော လူဦးရေကို ဒုက္ခသည် ဘဝရောက်စေပြီး အဆိုးရွားဆုံး အခြေအနေ တစ်ခုအနေနဲ့ ဓာတုဗေဒ စစ်လက်နက် ပါ အသုံးပြုလာကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအတွက် စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပြီး ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှု ဘယ်လိုရှိမယ် ဆိုတာ စောင့်ဆိုင်း နားစွင့်လျက် ရှိကြကြောင်း သိရပါတယ်။
Aung Kham (Yoyarlay)
Posted by drmyochit Monday, August 26, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှုဆိုတာ ဓားနဲ့ခုတ်၊ တုတ်နဲ့ရိုက်၊ သေနတ်နဲ့ပစ်၊ ဗုံးနဲ့ခွဲမှ Genocide လို့သတ်မှတ်မှာလား။ ဟောဒီမှာ ဒါဟာခင်ဗျားတို့ ကျုပ်တို့ကို မသိမသာ Genocide လုပ်နေတယ်ဆိုတာလေး သိသာအောင် မြင်ကြည့်ကြရအောင်။
လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်နေတာ၊ ကျုပ်တို့ရဲ့ အနာဂါတ်တွေကို ချေမွနေတာ။ တမြေ့မြေ့နဲ့ လှိုက်စားနေတာ။ ဒါကို မတားဆီး၊ မပိတ်ပင်နိုင်ရင်တော့ မြန်မာပြည်အနှံ့ ကင်ဆာဖေါင်ဒေးရှင်းတွေနဲ့ မီးသဂြိ င်္ုလ်စက်တွေသာ တိုးချဲ့ထားကြပေရော့ဗျို ..... အခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကမ္တာမှာ ကင်ဆာ အဖြစ် အများဆုံး ဒုတိယ လိုက်တဲ့နိုင်ငံ ........ ....
၁၇-၈-၂၀၁၃ နေ့မှာ တောင်တွင်းကြီးမြို့ အ.လ.က (၁) မှာ ကျောင်းကျန်းမာရေး စစ်ဆေးစဉ်က ကျောင်းဈေးဆိုင်မှာ ရောင်းချနေတဲ့ မုန့်တွေကို စစ်ဆေးတဲ့အခါ မှာ ရောင်းချနေတဲ့ မုန့်အများစုဟာ ကလေးများအတွက် အာဟာရ မဖြစ်တဲ့အပြင် အန္တရာယ် ကြီးမားတဲ့ မုန့်တွေပါ တွေ့ရှိရပါတယ် ။
ပုံပါအတိုင်း အချိုရည်ဘူးက ပြည်တွင်းဖြစ်ပါ။ ရေသန့်မဟုတ်တဲ့ ရိုးရိုးရေထဲမှာ ဆိုးဆေးရော၊ သကြားဆီနဲ့ အနံ့ ထည့်ပြီး packing ပိတ်ထားတာပါ ။ ဆိုးဆေးထည့်တာ လက်ဆများသွားပုံ ရပါတယ် ။ ရေတွေက ပြစ်နှစ်နေပြီး အမှုန်တွေတောင် တွေ့ရပါ တယ် ။ မုန့်ထုပ်တွေကတော့ သက်တမ်းလွန်နေတာ တစ်နှစ်နဲ့ နှစ်လ ရှိနေပြီ ဖြစ်တဲ့ တရုတ်မုန့် တွေပါ ။ဒီလို သက်တမ်းလွန်မုန့်တွေနဲ့ ဆိုးဆေးရည်တွေကို ပိုက်ဆံပေးပြီး မုန့်လုပ်စားနေကြရတဲ့ ကျွန်တော် တို့ရဲ့ ကလေးတွေရဲ့ အဖြစ်ဟာ မတွေးရဲစရာပါ ။
ဈေးပေါပေါနဲ့ ဝင်လာတဲ့ တရုတ်မုန့်တွေ ၊ ဆိုးဆေးအပြည့်နဲ့ အချိုရည်ဘူးတွေ၊ ဂျယ်လီဘူးတွေ၊ ရေခဲချောင်းတွေ ၊ စားအုန်းဆီခဲတွေနဲ့ ကြော်ထားတဲ့ အကြော်တွေ ၊ ဆိုးဆေးတွေနဲ့ အကင်တွေ ၊ ဆိုးဆေးတွေ ဆိုးထားတဲ့ သရက်ကင်တွေ၊ သကြားဆီတွေနဲ့ ဘာတွေရောစပ် ထားမှန်းတောင်မသိနိုင်တဲ့ တရုတ်သကြားလုံးတွေ၊ အစရှိတဲ့ မုန့်တွေပဲ နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ မြိန်ရည် ရှက် ရည် စားနေကြရရှာတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကလေး များ ကို ဘယ် လို ကယ် ဆယ် နိုင် ကြမ လဲ??
ဒီမုန့်တွေကို ရောင်းချ နေတာ ကျွန်တော် စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ ကျောင်းတကျောင်းထဲမှာပဲ ရောင်းနေတာ မ ဟုတ်ပါဘူး ။ မြန်မာနိုင်ငံ တနံတလျား တောရော မြို့ပါ ကျောင်းတိုင်းကျောင်းတိုင်းမှာ ရောင်းချနေတာပါ ။ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ မျိုးဆက်ကလေးတွေ အားလုံးမှာ အန္တရာယ် ကြီးကြီးမားမား ကျရောက်နေပြီ ဆိုတာဟာ ငြင်းလို့ မရလောက်အောင်ကို သိသာထင်ရှား နေပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
အခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကမ္တာမှာ ကင်ဆာ အဖြစ် အများဆုံး ဒုတိယ လိုက်တဲ့နိုင်ငံ ဖြစ်နေပါပြီ။
ဒီနှုန်းအတိုင်း ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ကလေးတွေ အားလုံး အသက် ၂၀ နဲ့ ၃၀ ကြားမှာ အသည်း ကင်ဆာလို ရောဂါတွေနဲ့ သေဆုံးကြရဖို့ သေချာနေပါပြီ။
ဒီကလေးတွေသာ မ်ျုးဆက်ပြတ်ကြရင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ဘယ်လောက်တော်တဲ့ ခေါင်းဆောင် အုပ် ချုပ် အုပ် ချုပ် ။ ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့ စနစ်နဲ့ချီတက် ချီတက် တိုးတက်ကြပါ့မလား????
ဒါကိုမှ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုလို့ မပြောရင် ဘာကို ပြောမှာလဲ??????
Credit to - U Kyaw Swe & ဟာဂျူလီ(ကသာ)
Posted by drmyochit Monday, August 26, 2013, under ကျန်းမာရေးဆောင်းပါး | No comments
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က Mozilla Firefox 23.0.1ဗားရှင်းကို တင်ဆက်ပေးပြီးတဲ့နောက် အခု Myanmar Forward ပရိသတ်ကြီးအတွက် အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Mozilla Firefox 24.0 Beta 5ကို တင်ဆက်ပေးလိုက် ပါတယ်။ ဖိုင်အရွယ်အစား 21.7MBရှိပြီးတော့ Myanmar Forward မှာ အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ် ရယူနိုင်ပါတယ်။ Windows, Mac, Linux 32-bit, Linux 64-bitစတဲ့ OSတွေမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဗားရှင်းအသစ်မှာတော့ OS X 10.7နဲ့အထက် တွေအတွက် Retina Displayထောက်ပံ့ ပေးထားပြီး WebRTCအတွက် Supportလုပ်ထားတာတွေပါ ပါဝင်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ Download ရယူနိုင်ပါတယ်
ဒါ့အပြင် HTMLစနစ်အသစ်နဲ့ ရုပ်ပုံတွေရဲ့ အရည်အသွေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေတဲ့ စနစ်တွေ၊ Tabတွေ ကူးပြောင်းတဲ့အခါမှာ ပိုမိုသာလွန်တဲ့ Performanceတွေနဲ့ Developerတွေ အတွက်လည်း များစွာ ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ HTML5 Languageလည်း ထောက်ပံ့ထားပြီး HTTPS(https://)တွေကို သွားတဲ့အခါမှာလည်း လွယ်ကူသွားအောင် ဖန်တီးပေးထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီနေ့ခေတ်မှာ လူသုံးအများဆုံး Browserတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Mozilla Firefoxဗားရှင်း အသစ်ကို ဒေါင်းလုဒ်ရယူပြီး သင့်ကွန်ပျူတာထဲမှာ Up To Dateဖြစ်နေအောင် ထည့်သွင်း အသုံးပြုလိုက်ပါတော့။
ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း လက်မှတ်ပြနိုင်ရင် သိမ်းထားသည့်မြေများ ပြန်ပေးမည်
အစိုးရ၀န်ကြီးဌာနအချို့က သိမ်းထားသည့် လယ်ယာမြေများကို ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း လက်မှတ်ပြနိုင်ပါက ယခုနှစ် အောက်တိုဘာတွင် ပြန်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းက သြဂုတ် ၂၃ ရက်က ပြောကြား လိုက်သည်။
နေပြည်တော် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအတွင်း သတင်းမီဒီယာများနှင့်တွေ့ဆုံစဉ် ၀န်ကြီးကယခုကဲ့သို့ ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ပိုင်ရှင်များ အမှန်တကယ် ပြန်လည်ရရှိရန် အစီအစဉ်နှင့် ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပြီး လက်မှတ်ရှိ သူများကို ပထမဦးစားပေး ပြန်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် အဆိုပါ အစီအစဉ်များအတွက် စီစစ်မှုများ ပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်ပြီး ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြို့ရွာနှင့် အိုးအိမ် ဦးစီးဌာနနှင့် စစ်တပ်မှ သိမ်းယူထားသည့် လယ်ယာမြေများကို ပြန်လည်ပေးအပ်မည် ဟု ၀န်ကြီးက ဆိုသည်။
“ကန့်ကွက်မဲ့သူ မရှိဘူးဆိုရင် တကယ် ပိုင်သွားပြီ။ သားသမီးကို ပေးလို့ရပြီ။ နောက်ပြီး ပေါင်လို့လည်းရပြီ။ အပိုင်ဖြစ်ပြီ” ဟု ဦးစိုးသိန်းက ကတိပေးပြောကြားသည်။
ဦးစိုးသိန်း၏ အဆိုအရ နိုင်ငံတော် စိုက်ခင်းများတွင် ၀င်ရောက်နေထိုင်သော ကျူးကျော်နေထိုင်သူများအတွက် ကျေးရွာပေါင်း တစ်ထောင်ကျော်ကို သြဂုတ်လအတွင်း ပြန်လည်နေရာချထားပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ဆိုက်ရောက်ခရီးသည် ကားကွင်းအတွင်း Wi-Fi အခမဲ့ အသုံးပြုခွင့်ပေးမည်
ယခုလမှစတင်ကာ စမ်းသပ်ဖွင့်လှစ်လိုက်သော ဆိုက်ရောက်ခရီးသည်ကားကွင်း (Aung Mingalar High - Way Bus Arrival)တွင် ဝိုင်ဖိုင်အခမဲ့ အသုံးပြုခွင့်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း Myint and Paing ကုမ္ပဏီမှ ဒါ ရိုက်တာ ဦးသော်ဇင်အောင်က ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် ခရီးသည်များပြားသော အချိန်ကို ဦးစားပေးကာ ဝိုင်ဖိုင်အင်တာနက် အခမဲ့ အသုံးပြုခွင့်ပေး လျက်ရှိ သည်ဟု သိရပြီးနောက်ပိုင်းတွင် အချိန်ပြည့်အသုံးပြုခွင့်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ “လက်ရှိ အချိန်ပိုင်း ဝိုင်ဖိုင် အခမဲ့အသုံးပြုခွင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ မနက် ၃ နာရီခွဲကနေ ၈ နာရီအထိ အသုံးပြုခွင့်ပေးထားတယ်။ ခရီးသည်အများပြားဆုံးအချိန်ကို အသုံးပြုခွင့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဦးသော်ဇင်အောင်က ပြောကြားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံးအဖြစ် ခရီးသည်တင်ယာဉ်ငယ် ဆိုက်ရောက် ကွင်းကို စမ်းသပ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းကွင်းတွင် အခမဲ့အင်တာနက်စနစ် အသုံးပြုခွင့်ပေး ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ကွင်းတွင် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာများကိုလည်း ဆောင်ရွက်ထားကြောင်း သိရသည်။ “လုံခြုံရေးနဲ့ ပတ် သက်ပြီး CCTV 16 လုံးတပ်ဆင်ထားပါတယ်” ဟု အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။ ၎င်းအပြင် ငွေလွှဲကောင်တာများကိုလည်း တပ်ဆင် သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ လက်ရှိ ATM ငွေထုတ်စက်များကို ကမ္ဘောဇဘဏ်နှင့် သမဝါယ မဘဏ်တို့က တပ်ဆင်ထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ အဆိုပါကွင်းအတွင်း အရေးပေါ် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက် ရန် ၂၄ နာရီဆေးခန်းကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ထားရှိကြောင်းသိရသည်။
မိုဘိုင်းလ် ဆင်းမ်ကတ်များ အရေအတွက် အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ ဆက်လက် ရောင်းချမည်
အခြေခံ အဆောက်အဦများ တည်ဆောက်ပြီးစီးပါက လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ဖြန့်ချိပေးမည်ဟု ဆိုထားသည့် မိုဘိုင်းလ် ဆင်းမ်ကတ်များကို လက်ရှိရောင်းချထား ပေးနေသည့်အတိုင်း အရေအတွက် အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ ဆက်လက် ရောင်းချသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးသောင်းတင်က ပြောကြားသည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် လစဉ်ဆင်းမ်ကတ် သုံးသိန်းငါးသောင်းကို ငွေကျပ် ၁၅၀၀ နှုန်းဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အားလုံးသို့ ဖြန့်ချိနေခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းအတိုင်းသာ ဆက်လက် ဖြန့်ချိမည် ဖြစ်ကြောင်း ဦးသောင်းတင်က ထပ်လောင်း ပြောကြားသည်။ “ဒီလိုရောင်းတာ ဘယ်အချိန်အထိ ရောင်းမှာလဲဆို မလိုချင်တော့တဲ့ အချိန်အထိ ရောင်းသွားမှာပါ” ဟု ဦးသောင်းတင်က ဆိုသည်။ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းက မိုဘိုင်းလ် ဆင်းမ်ကတ်များကို အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ ဖြန့်ချိနေခြင်းကြောင့် သမ္မတဦးသိန်းစိန် သတ်မှတ်ပေးသည့် ၁၅၀၀ ကျပ် ဈေးနှုန်းများ ပြင်ပဈေးကွက်တွင် အဆတစ်ရာနီးပါး ကွာဟနေကြောင်း ဖုန်းအရောင်းဆိုင်များထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
မိုဘိုင်းလ် ဆင်းမ်ကတ်များ ပြင်ပဈေးနှုန်း မြင့်မားနေခြင်း၊ အရေအတွက် အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ ရောင်းချနိုင်ခြင်းတို့မှာ စနစ်သစ်တစ်ခုသို့ ကူးပြောင်းနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပြီး အချိန်အနည်းငယ် သည်းခံစောင့်ဆိုင်းပေးရန် ဦးသောင်းတင်က တိုက်တွန်း ပြောကြားသည်။ ကျပ် ၁၅၀၀ တန် CDMA ဆင်းမ်ကတ်များမှာ ပြင်ပပေါက်ဈေး ကျပ်ရှစ်သောင်း ဝန်းကျင်ရှိပြီး ၁၅၀၀ တန် GSM ဆင်းမ်ကတ်များမှာမူ တစ်သိန်းနှစ်သောင်းကျပ် ဝန်းကျင်အထိ ဈေးပေါက်နေကြောင်း ဖုန်းဆင်းမ်ကတ် အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်နေသူများက ဆိုသည်။ လစဉ် မိုဘိုင်းလ် ဆင်းမ်ကတ် သုံးသိန်းငါးသောင်းကို တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် အသီးသီးသို့ မဲစနစ်ဖြင့် ခွဲဝေ ရောင်းချပေးမည်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်သည့် ဆက်သွယ်ရေး စခန်းများ တည်ဆောက် တပ်ဆင်ပြီးပါက အကန့်အသတ်မရှိ ရောင်းချပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ကြေညာထားသည်။
အသက် ၉ဝ အရွယ် အဘွားအို တစ်ဦးအား အသက် ၈နှစ်အရွယ် ကလေးငယ် တစ်ဦး သေနတ်နှင့် ပစ်သတ်
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင် အသက် ၈နှစ်အရွယ် ကလေးငယ် တစ်ဦးသည် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများ ပါဝင်သည့် ဗီဒီယို ဂိမ်းခွေ တစ်ခွေအား ကြည့်ရှု ခဲ့ပြီးနောက် ၎င်းအား ထိန်းကျောင်းသည့် အသက် ၉ဝ နှစ်အရွယ် အဘွားအို ကြီးအား သေနတ်နှင့် ပစ်သတ်ခဲ့ကြောင်း လူဝီစီယားနား ပြည်နယ် အာဏာပိုင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါပစ်ခတ်မှုသည် လူဝီစီယားနားပြည်နယ် Country Breeze Mobile Home Park၌ သြဂုတ် ၂၂ရက် ဒေသ စံတော်ချိန် ညနေ ၅ နာရီခန့်က ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ၎င်းကလေးသည် အဘွားအို ရုပ်မြင်သံကြား ကြည့်ရှုစဉ် သူမ၏ ဦးခေါင်း အနောက်အား သေနတ်ဖြင့် တစ်ချက်တည်း ပစ်သတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အဘွားဖြစ်သူမှာ အခင်းဖြစ်ရာ နေရာ၌ ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားပြီးနောက် စုံစမ်းစစ်ဆေး သူများက ၎င်းလူငယ်အား စစ်ဆေး မေးမြန်းခဲ့ကာ ၎င်း လူငယ် သည် လက်နက်နှင့် ကစားစဉ် အဘွားအိုအား သေနတ်နှင့် တမင်တကာ ပစ်သတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု စုံစမ်းစစ် ဆေးသူ များက ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့နောက် ၎င်းလူငယ်အား မိဘများ ထံသို့ သြဂုတ် ၂၂ ရက် နှောင်းပိုင်းတွင် ပြန်လွှတ် ပေးခဲ့ကြောင်းနှင့် အာဏာပိုင် များ အနေဖြင့် ၎င်း၏ အသက်အရွယ် ငယ်ရွယ်မှုကြောင့် ၎င်းအား တရားစွဲဆို နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း ပြည်နယ် ဆိုင်ရာ ရုံးက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Appleရဲ့ မကြာခင်ထွက်ရှိတော့မယ့် iPhoneအသစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းတွေကတော့ ထပ်မံထွက်ရှိ လာပြန်ပါပြီ။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ အဆိုပါ ဖုန်းအသစ်ရဲ့ Processorနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းထွက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်သံအစီအစဉ် တင်ဆက်သူ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Clayton Morrisကတော့ သူ့ရဲ့Twitter စာမျက်နှာမှာ iPhoneအသစ်ရဲ့ A7 Chip Processorဟာ လက်ရှိ iPhoneတွေမှာ သုံးနေတဲ့ A6ထက် ၃၁%ပိုမို မြန်ဆန်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ 9to5Macဆိုတဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်က Appleဟာ ၎င်းတို့ရဲ့ 64-bit A7 Processorကို နမူနာ iPhone 5S(အိုင်ဖုန်းအသစ်) တစ်ချို့မှာ စမ်းသပ်သုံးစွဲနေတယ်လို့ သတင်းထုတ်ပြန် ခဲ့ပါတယ်။ 64-bit Processorတစ်ခုဟာ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကို ရုပ်ထွက်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေပိုမို ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ပေးနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ ဒီသတင်းတွေအရ 64-bitချစ်ပ် တွေကိုစမ်းသပ်နေဆဲသာ ဖြစ်ပြီး ဒီနှစ်အတွင်း သေချာပေါက် ထွက်လာမယ်လို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး လို့လည်း သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Twitterပေါ်က ဆွေးနွေးချက်တွေ ကလည်း 64-bit A7 Processorတွေ မထွက်ရှိလာရင်တောင်မှ 64-bit A8 Processorကတော့ ၂၀၁၄ခုနှစ်လောက်မှာ ရောက်ရှိလာလိမ့်မယ်လို့ ထင်ကြေးပေးလျက် ရှိပါတယ်။
Appleအနေနဲ့ လက်ရှိ iPhone 5ထက် ပိုမိုမြန်ဆန် ကောင်းမွန်တဲ့ စမတ်ဖုန်းအသစ်ကို တကယ်ပဲထုတ်လုပ်သွား နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ လက်ရှိ စမတ်ဖုန်းလောကရဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်တဲ့ LG, Samsung, HTCတို့ကို အသာအယာ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအိုင်စီတီ ပရိသတ်ကြီးကရော မကြာခင် ထွက်ရှိလာမယ့် iPhoneအသစ်မှာ ဘယ်လို ထူးခြားကောင်းမွန်မှုတွေကို မြင်တွေ့ခံစားလိုပါသလဲ?
ဝေဟင်ထက်တွင် ရဲရင့်စွာ စတန့်ထွင်လှုပ်ရှားပြခဲ့သည့် ၉ နှစ်သမီးလေးများ
အသက်(၉)နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ် (၂)ဦးသည် အံ့မခန်း စွန့်စားမှု တစ်ခုကို တက်ညီလက်ညီ လုပ်ဆောင်ပြခဲ့ပြီးနောက် ယခုအခါ ကမ္ဘာ့စံချိန် မှတ်တမ်းတွင် ပါဝင်ရန် စိတ်လှုပ်ရှားစွာ စောင့်မျှော် နေပြီ ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ဝမ်းကွဲညီအစ်မ နှစ်ဦးဖြစ်သည့် ဖလိမ်းဘရီဝါနှင့် ရို့စ်ပါဝဲလ်တို့သည် တစ်နာ ရီလျှင် မိုင်(၁၀၀)နှုန်း ပျံသန်းနေသည့် လေယာဉ်ငယ်များ ၏ တောင်ပံထက်တွင် ရဲဝံ့စွာဖြင့် စတန့်ပြ ကွက်များ လှုပ်ရှားပြခဲ့သည်။ ဗြိတိန်မှ လူစွန့်စား မိန်းကလေးငယ် (၂)ဦးသည် မြေမျက်နှာပြင် အထက် ပေ(၅၀၀)တွင် ဝဲပျံနေသော Boeing Stearman တောင်ပံနှစ်ထပ်
လေယာဉ်လေး နှစ်စင်းပေါ်တက်၍ စတန့်ပြခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
Wing Walkingဟု ခေါ်ဆိုသည့် အဆိုပါ စတန့်ပြကွက်မျိုးကို လန်ဒန် အနောက်ဘက် ကီရန်ဆက်စတာ မြို့လေးမှ ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်ကွင်းလေး တစ်ခုတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ "ကျွန်မတို့ အချိန်တော်တော် များများ အော်ရင်း လက်ပြနေတယ်လေ။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် Superwomanလို အိုက်တင် မျိုးနဲ့ လည်း ဓာတ်ပုံလေးတွေ ရိုက်ခဲ့သေးတယ်"ဟု ရို့စ်က ဆိုသည်။ သူမက "အပေါ်စီးကနေပြီး အိမ်တွေ ကို မိုးကြည့် ရတာ အံ့ဩစရာပါ။
အိမ်လေးတွေကို သေးသေးလေးပဲ မြင်ရတယ်"ဟုလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ဖလိမ်းက ယခုအတွေ့ အကြုံ ကို အတန်ငယ် ကြောက်ရွံ့မိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ "ဒါပေမဲ့ လေထဲရောက်သွားတော့လည်း အရမ်း အရမ်းေ ပျာ်စရာ ကောင်းသွားတာပါပဲ။ ကျွန်မ စိတ်လှုပ်ရှားနေမိတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ နည်းနည်းလည်း တုန်လှုပ်မိခဲ့ပါတယ်"ဟု ဖလိမ်းက ဖွင့်ဟခဲ့သည်။
ဖလိမ်း၏ အစ်ကိုဖြစ်သူ တိုက်ဂါးသည် ကမ္ဘာ့အသက်အငယ်ဆုံးေ လယာဉ်တောင် ပံပေါ် စတန့်ပြ သနိုင်သူ အဖြစ် (၂၀၀၉)ခုနှစ်က အသက်(၈)နှစ် အရွယ်တွင် စံချိန်တင်ထားသည်။ ဖလိမ်းနှင့် ရို့စ်တို့ ကမူ ပုံစံဖွဲ့ ပျံသန်းသော လေယာဉ်များပေါ်တွင် အသက်အငယ်ဆုံး စတန့်ထွင်ပြနိုင်သူများအဖြစ် စံချိန် တင်ရန် မျှော်လင့်ထားသည်။ ကမ္ဘာ့မှတ်တမ်းအဖွဲ့ ဂင်းနစ်သည် ယခုအားထုတ်မှုကို ပြန်လည် စီစစ်လေ့ လာပြီး ကျေနပ်သည့်အခါ မှတ်တမ်းတင်ပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။ ဖလိမ်းနှင့် ရို့စ်တို့သည် Duchenne muscular dystrophyခေါ် အရိုးကြွက်သား အားပျော့မှု ဝေဒနာတစ်ရပ် ခံစားနေရသည့် (၆)နှစ်အရွယ် သူငယ် ချင်း အီလီခရော့စ်လေအတွက် အကူအညီပေးရန် ယခုစတန့်ပြကွက်ကို အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။
"အီလီကို အကူအညီ ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် သိပ်ကောင်းမှာပါ။ အီလီလို ကလေးလေးတွေ အသက်ကြီး လာလေလေ၊ ကိုယ့်ဖာသာ ရပ်တည်ဖို့ ခက်ခဲလာလေလေ ဖြစ်သွားတာက အရမ်းဆိုးပါတယ်။ ကျွန်မတို့ သူ့ကို တတ်နိုင် သလောက် ကူညီချင်တယ်"ဟုလည်း ရို့စ်က ဆိုသည်။ အီလီ၏ မိခင်ဖြစ်သူ အမ်မ လီခရော့စ်လေ က "ကျွန်မသားလေးအတွက် တခြားကလေးနှစ်ယောက်က ခုလို အကူအညီပေးခဲ့တယ် ဆိုတာ က အရမ်းကို အံ့ဩဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်မသားလို ဝေဒနာရှင် ကလေးငယ်လေးတွေ ထောင်နဲ့ ချီ ရှိနိုင်ပါတယ်။ အားလုံး အဆင်ပြေ ကျန်းမာဖို့ ကျွန်မ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ ရို့စ်နဲ့ ဖလိမ်းတို့ ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကတော့ ကျွန်မရဲ့ သားအတွက် ဂုဏ်ပြုမှု တစ်ခုလို့ ခံယူမိပါတယ်"ဟု ပြောကြား သွားသည်။
မန္တလေးတွင် တန်ဖိုးနည်း Tablet များနှင့် ဟန်းဆက်များ ရောင်းအားကျ
မန္တလေးမြို့ မိုဘိုင်းဈေးကွက်အတွင်းမှ အရောင်းဆိုင်များ ပြောကြားချက်အရ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း တန်ဖိုးသက်သာသော တရုတ်နိုင်ငံလုပ် Tablet များနှင့် တန်ဖိုးနည်း ဟန်းဆက်များ ရောင်းအားကျဆင်းနေကြောင်းသိရသည်။
စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် ကျပ်၁၅၀၀ တန် ဖုန်းဆင်းကတ်များ ရောင်းချမပေးခင်အချိန်အထိ မိုဘိုင်းဈေးကွက်အတွင်း ရောင်းအားသာမန်ရှိနေခဲ့သော်လည်း ယခုရက်ပိုင်းတွင်း ရောင်းအားကျဆင်းလာကြောင်း သိရသည်။ “အရင်အခေါက် ကျပ် ၁၅၀၀ တန် ဆင်းကတ်တွေ မဲနှိုက်ချပေးတုန်းကဆို ဟန်းဆက်ရောင်းအားက သိသိသာသာ တက်လာတယ်။ တတိယအကြိမ်မြောက် မဲနှိုက်ချထားပေးတုန်းကလည်း ရောင်းအားတိုးတက်လာပေမယ့် ပုံမှန်ရောင်းအား အောက်မကျခဲ့ဘူး။ အခုစတုတ္ထအကြိမ် ၁၅၀၀ ဆင်းကတ်ချထားပေမယ့်လည်း ဟန်းဆက်ရောင်းအားက တက်မလာဘူး၊ အဓိကကတော့ ချထားပေးတဲ့ လိုင်းကတ်တွေကို ဝယ်ရောင်းသမားတွေက တစ်သိန်းကျော်ထိပေးဝယ်ပြီး ကိုင်ထားတယ်။ ပြန်ရောင်းတဲ့အခါကျတော့လည်း ဝယ်မယ့်သူက နည်းတော့ လိုင်းကတ်တွေက ဆိုင်တွေမှာပဲ ပုံနေတဲ့သဘောပဲ။ တကယ်ကိုင်မယ့်သူဆီ မရောက်တော့ ဟန်းဆက်ရောင်းအားလည်း တက်မလာဘူး” ဟု ကြိုက်ရာဟန်းဆက်ယူ ၁၅၀၀ တန် ရောင်းချသည့် ဟန်းဆက်အရောင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်မှ သုံးသပ်ပြောကြားသည။် “အရင်လတွေက တရုတ်ကဝင်တဲ့ ၁ သိန်းအောက်တန် Tablet တွေ၊ လိုင်းကတ်ထည့်လို့ရတဲ့ Tablet တွေ ရောင်းအားပုံမှန် ရှိနေတယ်။ ခုတော့ကလေးတွေ ကျောင်းဖွင့်ရာသီ ရောက်လာလို့လား၊ တချို့ဟန်းဆက်တွေက စကရင်ကြီးလာပြီး ဈေးနှုန်းသင့်လာလို့လားတော့မသိဘူး။ Tablet ရောင်းအားတော့ ပုံမှန်အောက်ကျနေတယ်ပြောရမယ်။ တစ်ရက်နေမှ Tablet တစ်လုံးရောင်းမထွက်တဲ့ နေ့လိုမျိုးတောင်ရှိလာတယ်” ဟု ၈၃ လမ်းရှိ မိုဘိုင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်မှ ထပ်မံသိရသည်။ ဈေးကွက်အတွင်းမှ မိုဘိုင်းအရောင်းဆိုင်ကြီး တချို့မှပြောကြားချက်အရ တန်ဖိုးသင့်တင့်သော ဈေးနှုန်း ၁၀၀၀၀၀ ကျပ်ဝန်းကျင်ဟန်းဆက်အမျိုးမျိုး ရောင်းအားမှာ ပုံမှန်အောက်ရှိနေသော်လည်းအခြား ဖန်ရှင်မြင့်၊ ကွာလတီမြင့် နာမည်ကြီး ဟန်းဆက်တံဆိပ်များမှာ မော်ဒယ်အသစ်ထွက်တိုင်း ရောင်းအားကောင်းလျက်ရှိနေကြောင်းသိရသည်။
Ref & Credit: Internet Journal
အရမ်းကိုပေါ့ပါးပြီး စမတ်ကျတဲ့ laucher လေးပါ...........
အသုံးပြုသင့်တဲ့ laucher လေးဆိုလည်းမမှားပါဘူး............
အားလုံးပဲ ဒီlaucher လေးသုံးပြီးလန်းနိုင်ကြပါစေ.............
ပက်ရှဝါ၊ သြဂုတ် ၂၅။
ပါကစ္စတန်တာလီဘန်အဖွဲ့သည် အစိုးရ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ရန် ကမ်းလှမ်းမှုကို ကြိုဆိုသော အကြီးတန်းတပ်မှူးတစ်ဦးအား ဘေးဖယ်ထားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ၎င်းအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ရှာဟီဒူလာရှာဟစ်က စနေနေ့တွင် ပြောကြားသည်။
ယခုဖယ်ထုတ်ခံရသည်ဆိုသည့် တပ်မှူးကမူ ၎င်းတို့အဖွဲ့သည် သီးခြားတပ်ဖွဲ့ဖြစ်သောကြောင့် အမှုဆောင်ကောင်စီအနေနှင့် ၎င်းကို ဖယ်ရှား၍မရကြောင်း ပြောကြားပြီး ၎င်းတို့တွင် ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် အခြားကိစ္စများအတွက် ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အဖွဲ့ရှိကြောင်း ပြောကြားသည်။
တပ်မှူး အက်မာတူလာမူအာဝီယာသည် အစိုးရတို့၏ကမ်းလှမ်းမှုကို တုံ့ပြန်နိုင်သည့် အခွင့်အာဏာမရှိကြောင်း ၎င်းကိုလ်ညး ပန်ဂျပ်ပြည်နယ်အလယ်ပိုင်းရှိ ပါကစ္စတန် တာလီဘန်တပ်ခွဲမှ ခေါင်းဆောင်နေရာမှ ထုတ်ဖယ် လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားသည်။
ဇွန်လအတွင်း ရာထူးစတင် ထမ်းဆောင်သည့် ဝန်ကြီးချုပ် နာဝတ်ရှာရစ်သည် လွန်ခဲ့သော နှစ်များအတွင်း ထောင်ပေါင်းများစွာ သေဆုံးစေခဲ့သည့် သူပုန်ထမှုကို အဆုံးသတ်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းသည် တာလီဘန်တို့နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲစတင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား မဲဆွယ်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်က ပြောကြားသော မိန့်ခွန်းတွင် ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးပွဲကျင်းပလိုကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ပါကစ္စတန်အစိုးရတပ်သည် သူပုန်များကို လွန်ခဲ့သည့် နှစ်များအတွင်း တိုက်ခိုက်ခဲ့သော်လည်း သူပုန်များဘက်မှ ခံနိုင်ရည်ရှိမြဲဖြစ်ကာ တိုက်ခိုက်မှုများ မကြာခဏ လုပ်ဆောင်လေ့ရှိသည်။
ဝန်ကြီးချုပ်သည် အစောပိုင်းကမ်းလှမ်းမှုတွင် မေလအကုန်က အမေရိကန် မောင်းသူမဲ့ လေယာဉ် တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် စစ်သွေးကြွ အုပ်စုဘက်မှ ဒုတပ်မှူး သေဆုံးပြီးနောက် တာလီဘန်တို့က ကမ်းလှမ်းမှုကို ငြင်းပယ် ခဲ့သော်လည်း ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မြောက်ရေး ဆက်လက် တွန်းအားပေးနေခဲ့သည်။
ဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာစေရန် အိန္ဒိယထောင်သားများကို ပါကစ္စတန်လွှတ်ပေး
ဝါဂါ၊ပါကစ္စတန်၊ သြဂုတ် ၂၄။
ပါကစ္စတန် အစိုးရသစ်အနေနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် ဆက်ဆံရေး တိုးတက်လာရေး အမှတ်အသားတစ်ခုအဖြစ် ဖမ်းဆီးထားသည့် အိန္ဒိယမှအကျဉ်းသား ၃၃၇ ဦးကို စနေနေ့တွင် လွှတ်ပေးလိုက်သည်။
အိန္ဒိယနှင့် ပါကစ္စတန်တို့ကြားတွင် အငြင်းပွားနေကြသည့် ကက်ရ်ှမီးယားဒေသတွင် နယ်စပ်တစ်လျှောက် ယခုလအတွင်း တိုက်ခိုက်မှုအများအပြား ရှိခဲ့သည်။
ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ် နာဝတ်ရှာရစ်က အိန္ဒိယနှင့်ဆက်ဆံရေးသည် စီးပွားရေးကိုပြန်လည်း အဖတ်ဆည်ရာတွင် အဓိကကျကြောင်း ပြောကြားသော်လည်း အရပ်သား အစိုးရအုပ်ချုပ်ချိန်တွင်ပင်
ပါကစ္စတန် စစ်တပ်သည် နိုင်ငံခြားရေးနှင့် လုံခြုံရေးပေါ်လစီများကို ကိုင်ထားသည်။
ယခုလွှတ်ပေးလိုက်သည့် ဖမ်းဆီးခံထားရသူများတွင် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်နှစ်တွင်းက ပါကစ္စတန်တို့က ၎င်းတို့ရေပိုင်နက်ဟု ယူဆကြသည့် ပိုင်နက်တွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာသောကြောင့် ထိန်းသိမ်းခံရသည့် ငါးဖမ်းသမားများ ပါဝင်ပြီး ၎င်းတို့ကို ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ လာဟိုးမြို့နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အာရစ်ဆာမြို့ကြားရှိ ဝါဂါနယ်စပ်ဂိတ်မှတဆင့် အိမ်ပြန်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။
“ပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယဟာ အတိတ်တုန်းကတော့ တစ်နိုင်ငံတည်းပါ။ အဲဒါကြောင့် နှစ်နိုင်ငံဟာ ညီအစ်ကိုလိုမျိုး ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ပြီး သဘောမျှနေသင့်ပါတယ်”ဟု ဇန်နဝါရီလအတွင်း ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက် ယခုအိမ်ပြန်ရသည့် ငါးဖမ်းသမား တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
သို့သော် အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်က “နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေး တွေ့ရှိရပြီး ထောင်ကျရက်ပြီးသွားတဲ့ လူတွေကို လွတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ပုံမှန်လုပ်ရပ်ပါ၊ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမျိုး မဟုတ်ပါဘူး”ဟု ယခုဖြစ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြောကြားသည်။
အိန္ဒိယနှင့် ပါကစ္စတန်သည် ၁၉၄၇ခုနှစ် ဗြိတိန်လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ပြီးချိန်မှစ၍ စစ်ပွဲသုံးပွဲ တိုက်ခဲ့ကြပြီး နှစ်ပွဲသည် ဟိမဝန္တာတောင်တန်းဒေသ ကက်ရ်ှမီးယားရှိ မွတ်ဆလင် အများစုနေထိုင်ရာ နေရာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
မိတ်ဆွေ တစ်ယောက် ပိုင်တဲ့ အင်တာနက်ဆိုင်ကို ရောက်တော့ ထူးဆန်းတဲ့ မြင်ကွင်းတစ်ခုကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ နက်ဝက် ဂိမ်းကစားနေတဲ့ ကလေးတွေအားလုံးကို မောင်းထုတ် နေတာပါပဲ။ ( မင်းဘာလုပ်နေတာလဲ ) ဆိုတော့ ( ဒီကောင်တွေ ဂိမ်းကစားတာ တစ်နာရီ ပြည့်သွားလို့ ပြန်ခိုင်းနေတာ .. မောင်းမထုတ်ရင် တစ်နေကုန် ကစားနေမှာကွ ) တဲ့။ ( တစ်နေကုန် ကစားတော့ မင်းပိုက်ဆံရတာပေါ့ ) ဆိုတော့ ...
" ဟေ့ကောင် .. မင်းသူ့မိဘနေရာက စဉ်းစား၊ ဒီကောင်တွေ တနေကုန် ကစားနေလို့ ဘာအကျိုးကျေးဇူးမှ မရဘူး။
၁။ ခန္ဓာကိုယ် ချည့်နဲ့လာမယ်။
၂။ ရိုင်းစိုင်းကြမ်းတမ်း တတ်လာမယ်။
ဟိုကောင်ပြေးလာပြီ ဓားနဲ့ထိုး၊ နောက်ကကောင်ကို ဝင်ရိုက်လိုက်၊ ယီးတဲ့မှပဲ . မအေရိုး .. ဆိုတာတွေ မင်းမှ မကြားဖူးပဲ ..." တဲ့။ ( တခါတလေ ဖေ့ဘုတ် အကောင့်ဖွင့်ပြီး သုံးနေတာ၊ ပွန်းဆိုက်တွေ လိုက်ကြည့်နေတာလည်း တွေ့ရတတ် ပါတယ်။ )
ဒါဆိုဘာလို့ သူတို့ကို မင်းဆိုင်မှာ ကစားခွင့် ပေးနေသေးလည်း ဆိုတော့ တစ်နာရီလောက် စိတ်ထွက်ပေါက် ပေါ့ကွာတဲ့။ မင်းဆီမကစားရလည်း တခြားသွားဆော့မှာပဲ ဆိုတော့ ဒါတော့ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲတဲ့။
ချတ်တင်ထိုင်ရင်း အသက် ၄၀ လောက် လူတစ်ယောက်နဲ့ ငြိစွန်းသွားတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေးတစ်ယောက် အကြောင်း trust ရုပ်ရှင်ကလည်း သင်ခန်းစာပါ။ facebook ကနေ လူကုန်ကူးမှု ဖြစ်သွားတာတွေ၊ လိင်ဖျော်ဖြေမှု လုပ်ငန်းဘက် ရောက်သွားတာတွေလည်း ကျနော်တို့ဆီမှာ မြင်တွေ့နေရပြီ။
အခု ပိုဆိုးလာတော့မယ့် ပြသနာက ၁၅၀၀ ဖုန်းတွေ။ အရင်က ကျနော့ ကျူရှင်ကို ဖုန်းယူလာ တတ်တာဟာ ၁၀ တန်းသမားတွေပဲ ရှိပေမယ့် အခုဆို ၈ တန်း၊ ၉တန်း ကလေးတွေပါ ဖုန်းကိုင်လာကြပါပြီ။ ဆရာအလစ် ဂိမ်းခိုးနှိပ် တယ်။ မက်ဆေ့နဲ့ ချတ်တယ်။ ဒါနဲ့ ကျူရှင်ကို ဖုန်းမယူလာဖို့ ဖုန်းမြည်သံ ကြားရင် အပြီးသိမ်းမယ်လို့ စည်းကမ်း ထုတ်လိုက်ရပါတယ်။ ဒါလည်း ခိုးယူလာ ကြတာပါပဲ။
တစ်ရက်တော့ နဝမတန်း စာသင်ခန်းထဲမှာ ဖုန်းမြည်သံ ကြားတာနဲ့ အကုန် လိုက်စစ်လိုက်တော့ ဖုန်းငါးလုံးရတယ်။ မိန်းကလေးက သုံးလုံး၊ စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ မက်ဆေ့တွေ အကုန်ဖွင့် ဖတ်လိုက်တော့ မက်ဆေ့ အားလုံးရဲ့ တူညီတဲ့အချက်က ....
"အရမ်း သတိရတာပဲ " .... ... "ဘယ်နေ့ တွေ့ခွင့် ရဦးမှာလဲ " .. .. "အရင်နေရာကို လာခဲ့ရဦးမှာလား "
ဒါမျိုးတွေချည်းပါ။ မိဘများကိုယ်စား အလွန်ရင်ပူ မိပါတယ်။ မိဘတွေကရော မိမိတို့ ကလေးတွေရဲ့ လွယ်အိတ်တွေ ဖုန်းတွေ ဘယ်နှစ်ခါများ စစ်ဆေးဖူးကြ ပါသလဲ။ မဝယ်ပေးနဲ့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဝယ်ပေးကြပါ။ စစ်လည်း စစ်ဆေးကြပါ။ ကလေးတွေရဲ့ အသိဥာဏ် ရင့်သန်အောင်လည်း လေ့ကျင့်တည့်မတ် ပေးကြပါဦး။ ကျနော်တို့ မရှိတော့ရင် ဒီကလေးတွေရဲ့ လက်ထဲမှာ အရာရာ အားလုံး ချန်ထားခဲ့ရမှာပါ။ ကျနော်ကတော့ သူတို့အားလုံးကို အရွယ်မတိုင်မှီ လမ်းမလွဲကြဘဲ ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်စွာနဲ့ လျှောက်လှမ်းနိုင်သူတွေ ဖြစ်စေချင်တာ ပါပဲ။
"သိပ်ချစ်လွန်းလို့ ၈ တန်း ကျောင်းသားလေးကို ဆိုင်ကယ် ဝယ်ပေးတာဟာ သင်္ချိုင်းကုန်းမှာ မြေဝယ်ပေးလိုက် သလိုပါပဲ။ သိပ်ချစ်လွန်းလို့ ၈ တန်း၊ ၉ တန်း ကျောင်းသူလေးကို ဖုန်းဝယ်ပေး လိုက်တာဟာ အနာဂါတ်ကို တွင်းတူး မြှပ်နှံ လိုက်သလိုပါပဲ ... .. "
သည်းထန် - The Yangon Times Daily
ကန့်ဘလူ ပဋိပက္ခ အိမ် ၄၄ လုံးနှင့် ဈေးဆိုင် ၁၂ ခု မီးလောင်
သံသယရှိသူ ၁၂ ဦးကို အာဏာပိုင်တို့ ဖမ်းဆီးထား
အမျိုးသမီးတစ်ဦး ကာယိနြေ္ဒပျက်ပြား အောင်ပြုလုပ်ခံရမှုမှအစပြု၍ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကန့်ဘလူမြို့နယ်မှ လူအုပ်စုဖြင့် အကြမ်းဖက်သည့် ပဋိပက္ခများကြောင့်အိမ် ၄၄ လုံးနှင့် ဈေးဆိုင် ၁၂ ဆိုင် မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း သြဂုတ် ၂၅ ရက်ည ၈ နာရီကျော်တွင် အစိုးရကသတင်း ထုတ်ပြန်သည်။
ကနဦးသတင်းထုတ်ပြန်ချက်များတွင် မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းမရှိသော်လည်း ဖျက်ဆီးခံရသည့် အိမ်သုံးလုံးနှင့် ဆိုင်သုံးဆိုင်ရှိကြောင်း ပါရှိခဲ့သည်။
ထိုပဋိပက်္ခများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြစ်မှုကျူးလွန်သည်ဟု သံသယရှိသူ တစ်ဦးနှင့် မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုများလုပ်ဆောင်သည်ဟု ယူဆရသူ ၁၁ဦးကို ဖမ်းဆီးထားပြီဖြစ်ကြောင်း အစိုးရ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
အကြမ်းဖက်လူအုပ်စုများကြောင့် မီးသတ်သမားတစ်ဦးနှင့် အခြားသူတစ်ဦးတို့ ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့သည်ဟု အစိုးရက ထုတ်ပြန်ထားသော်လည်း သူတို့၏ဒဏ်ရာအခြေအနေ စိုးရိမ်ဖွယ်ရှိ၊ မရှိကိုမူ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ထည့်သွင်း မဖော်ပြခဲ့ပေ။
အကြမ်းဖက်သူများကြောင့် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊ ဆန်ပွဲရုံနှင့် ကွမ်းယာဆိုင်အချို့လည်း မီးရှို့ခံခဲ့ရသေးကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် တွေ့ရသည်။
ပဋိပက္ခများဖြစ်နေသည်ကို တားဆီးရန် လာရောက်သည့် စစ်ကိုင်းတိုင်း လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးအပါအ၀င် လုံခြုံရေးအဖွဲ့များကိုပင် အကြမ်းဖက်လူအုပ်စုများက လေးခွဖြင့်ပစ်ခတ်သဖြင့် သေနတ်ပစ်ဖောက် လူစုခွဲခဲ့ရသည်ဟု အစိုးရ၏ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
ထို့ပြင် အကြမ်းဖက်သူများရှို့သဖြင့် နေအိမ်များမီးလောင်နေသည်ကို ငြှိမ်းသတ်သည့် မီးသတ်ကားများ ရေမဖြည့်သာအောင် လူအုပ်စုကြီးက တားမြစ်ခဲ့သေးသဖြင့် ထပ်မံ၍ သေနတ်ပစ်ဖောက်၍ လူစုခွဲခဲ့ရသေးသည်ဟုလည်း ဆိုထားသည်။
ယင်းဖြစ်ရပ်များဖြစ်ပွားသည်နှင့် တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့မှ ၀န်ကြီးချုပ်အပါအ၀င် တိုင်းဝန်ကြီးအချို့၊ လွှတ်တော်အမတ်အချို့၊ သာသနာရေးဦးစီးမှူး
စသည့်ပုဂ်္ဂိုလ်များက အခင်းဖြစ်ပွားရာထန်းကုန်းရွာသို့သွားရောက်ကြပြီး အကြမ်းဖက်မှု ဆက်မဖြစ်စေရန် တိုင်းအဆင့်၊ ခရိုင်အဆင့် ရဲများ၊ ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်အဆင့် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌများကို အဖွဲ့ငယ်များခွဲကာ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားထားသည်ဟု အစိုးရက ဆိုသည်။
အဆိုပါပဋိပက္ခများသည် သြဂုတ် ၂၄ ရက် ညနေ ၆ နာရီတွင် အလုပ်မှပြန်လာသော အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ထန်းကုန်းနှင့် ဇီးပင်သာ ရွာနှစ်ရွာကြားရှိလမ်းတွင် ကိုဆန်းမင်းဦးဆိုသည့် အမျိုးသားက ကာယိနြေ္ဒပျက်စီးရန် နှောင့်ယှက်သည်မှ အစပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု အစိုးရက ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက တရားဝင် အင်တာနက်စာမျက်နှာမှတစ်ဆင့် ထုတ်ပြန် ထားသည်။
ကိုဆန်းမင်းဦးသည် ၎င်းက အမျိုးသမီးကို နှောင့်ယှက်နေသည်ကို အမျိုးသားတစ်ဦးတွေ့ရှိသွားသဖြင့် ထွက်ပြေးသွား ခဲ့ရာ ရွာသားများက၀ိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးပြီးနောက် ထန်းကုန်းရဲစခန်းသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့သည်ဟု အစိုးရ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါရှိသည်။ သူ့ကို ထန်းကုန်းရဲစခန်းမှ ကန့်ဘလူရဲစခန်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး ထိုမှတစ်ဆင့် ရွှေဘိုထောင်သို့ ပို့ဆောင်ခဲ့သည်ဟုလည်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဆိုထားသည်။
ထိုည ၇ နာရီကျော်တွင် ထန်းကုန်းနှင့် ဇီးတောမှ ရွာသား ၁၅၀ ခန့်က ထန်းကုန်းရဲစခန်းသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ကိုဆန်းမင်းဦးကို ထုတ်ပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့ရာ ရဲစခန်းကထုတ် မပေးသဖြင့် အိမ်နှင့် ဆိုင်ခန်းအချို့ကို မီးရှို့ ဖျက်ဆီးမှုများ စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ပဋိပက္ခများကို ထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ပြီး ရဲတပ်ရင်းများလည်း လုံခြုံရေးချထားသည်ဟု အစိုးရက လည်း ထုတ်ပြန်သလို စစ်ကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး ဦးစိုးစိုးဇော်ကလည်း မဇ္ဈိမကို အတည်ပြုသည်။
သို့သော် လုံခြုံရေးအစီအမံများ မည်သို့ပြုလုပ်ထားသည်နှင့် ရဲအင်အားမည်မျှ တာဝန်ချထားသည်ကို မဇ္ဈိမကမေးမြန်းရာ တိုင်းအစိုးရအတွင်းရေးမှူးက ပြန်လည် မဖြေကြားပေ။
လက်ရှိတွင် အိမ်ထောင်စု ၅၀ အတွက် ကယ်ဆယ်ရေးပစ်္စည်းများ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး၊ ယာယီကယ်ဆယ်ရေး စခန်းများ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ရန် အာဏာပိုင်တို့က စီမံနေပြီဟုအစိုး၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါရှိသေးသည်။
မင်းမင်း | တနင်္လာနေ့၊ သြဂုတ်လ ၂၆ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၀၈ နာရီ ၄၉ မိနစ်
ကန့်ဘလူ မြန်မာ-ကုလား အဓိကရုဏ်း နောက်ဆုံးရ သတင်း နှင့် ဓာတ်ပုံများ
Posted by drmyochit Monday, August 26, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | 1 comment
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကန့်ဘလူမြို့နယ်၌ ယမန်နေ့က အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား အမျိုးသား တစ်ဦးက ကာအိန်ဒြေ ပျက်ပြားအောင် ပြုလုပ်၍ အနိုင်ကျင့် စော်ကားရန် ကြိုးစားရာမှ အစပြုပြီး မကျနေပ်သူ လူအုပ်စုက ဈေးဆိုင်နှင့် နေအိမ်အချို့အား မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ တာဝန်ရှိ သူများက မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုများ ထပ်မံမဖြစ်ပွားစေရေးအတွက် ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပြီး မီးရှို့ဖျက်ဆီးသူဟု ယူဆရသူများအား ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း စစ်ဆေးလျက် ရှိကြောင်း သိရှိ ရသည်။
ယမန်နေ့ ညနေ ၆ နာရီခွဲခန့်တွင် ကန့်ဘလူမြို့နယ် ထန်းကုန်းကျေးရွာရှိ ဆံပင်ရောင်း/ဝယ်ဆိုင် မှ ပြန်လာစဉ် ထန်းကုန်းကျေးရွာနှင့် ဇီးပင်သာ ကျေးရွာကြား အရောက် ထန်းတော ကျေးရွာနေ ဆန်းမင်းဦး(ဘ) ဦးဆန်းဝင်းက လက်ဆွဲပြီး ဖက်လုံးကာ အနိုင်ကျင့် စော်ကားရန် ကြိုးစားခဲ့ကြောင်း၊ ထိုအချိန်တွင် ဇီးပင်သာ ကျေးရွာဖက်မှ အမျိုးသားတစ်ဦး ရောက်ရှိလာ သဖြင့် ဆန်းမင်းဦးသည် ထန်းကုန်းကျေးရွာဘက်သို့ ထွက်ပြေးခဲ့သော်လည်း ဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီး သဖြင့် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း၊ ဆန်းမင်းဦးအား ထန်းကုန်းရဲစခန်းမှ တစ်ဆင့် ကန့်ဘလူမြို့မ ရဲစခန်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ချုပ်နှောင်ခဲ့ပြီး မလိုလားအပ်သော ပြဿနာများ မဖြစ်ပွားစေရန် အတွက် ညပိုင်းတွင် ရွှေဘိုထောင်သို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်း။
ည ၇ နာရီခွဲခန့်တွင် ထန်းကုန်းကျေးရွာနှင့် ဇီးပင်သာ ကျေးရွာတို့မှ ရွာသူရွာသား ၁၅၀ ခန့်သည် ထန်းကုန်း ရဲစခန်းသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ဆန်းမင်းဦးအား ထုတ်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ ကြောင်း၊ ထို့နောက် လူအုပ်စုသည် သံလမ်းဘေးရှိ ဈေးဆိုင်နှင့် နေအိမ်အချို့အား မီးရှို့ဖျက်ဆီး ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အခင်းဖြစ်ပွားရာ နေရာသို့ မြို့နယ် စီမခံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ ဥက္ကဌ၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် ည ၈ နာရီခန့်တွင် ရောက်ရှိပြီး ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများ ထပ်မံမဖြစ်ပွား စေရန် ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်နေသည့်ကြားမှ အဆိုပါ လူအုပ်စုသည် ည ၉ နာရီခန့်တွင် ကြက်ခြံတစ်ခြံ၊ ဈေးဆိုင် နှစ်ဆိုင်နှင့် ဆန်ပွဲရုံ တစ်ခု၊ လူနေအိမ် တစ်လုံးတို့အား ဆက်လက် ဖျက်ဆီးမီးရှို့ခဲ့ကြသည်။
ထို့နောက် ည ၁၀ နာရီခွဲခန့်တွင် ရပ်ကွက် ၁ မှ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်နှင့် ဆန်ပွဲရုံ၊ ကွမ်းယာဆိုင် တို့အား မီးရှို့ခဲ့ရာ တိုင်းဒေသကြီး လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးနှင့် ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးတို့ ရောက်ရှိပြီး ဆူပူမှုအား ထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ယင်းလူစုသည် ယနေ့နံနက် ၁ နာရီခန့်တွင် အနီးပတ်ဝန်းကျင် ကျေးရွာများမှ ရောက်ရှိလာ သော လူအင်အား ၁၀၀၀ ခန့်နှင့် ရပ်ကွက်(၃)ရှိ နေအိမ်များအား ဆက်လက်မီးရှို့ရန် ရောက်ရှိ လာစဉ် တိုင်းဒေသကြီး လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးနှင့် လုံခြုံရေးအဖွဲ့များရောက်ရှိပြီး ရွှေဘို ခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့ မှူးက လူအုပ်စုအား မီးမရှို့ရန်နှင့် ရှဆေ့က်မတက်ရန် တားမြစ်ရာ လူအုပ်စုက လေးခွများဖြင့် ပစ်ခတ်သဖြင့် နံနက် ၁ နာရီ ၁၅ မိနစ်ခန့်တွင် သေနတ်ပစ်ဖောက် လူစုခွဲခဲ့ရသည်။
ထိုသို့ တားမြစ်စဉ်အတွင်း မီးငြိမ်းသတ်နေသည့် မီးသတ်ကားများအား ဆည်ရေသွယ်မြောင်းမှ ရေဖြည့်၍ မရအောင် တားမြစ်ခြင်း၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား အန်တရာယ်ပြုခြင်းတို့ကြောင့် ဒုတိယအကြိမ် သေနတ်ပစ်ဖောက် အသိပေးပစ်ခတ်ခဲ့ရာ လူအုပ်စုများ လူစုကွဲသွားပြီး မီးသတ်ကားများ ရေဖြည့်နိုင်ကာ မီးငြိမ်းသတ်ခြင်းကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့သည်။
ရဲတပ်ရင်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်လည်း ထန်းကုန်းကျေးရွာသို့ နံနက် ၃ နာရီ ကျော်ခန့်တွင် ရောက်ရှိပြီး လုံခြုံရေးကိစ်စရပ်များနှင့် မီးငြိမ်းသတ်ခြင်းတို့ကို ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသဖြင့် လည်းကောင်း၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၇၀ ခန့်က မီးသတ်ကား ၁၀ စီးဖြင့် မီးငြိမ်းသတ်ခဲ့မှုကြောင့် လည်းကောင်း နံနက် ၃ နာရီခွဲခန့်တွင် မီးညွန့်ကျိုးခဲ့ပြီး နေအိမ် ၄၄ လုံး မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ကာ ရွာအတွင်းရှိ ဈေးဆိုင် ၉ ဆိုင်၊ အိမ်ဆိုင် ၄ ဆိုင် ဖျက်ဆီးခြင်း ခံခဲရကြောင်း၊ မီးသတ် တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့် အခြားတစ်ဦးတို့ ဒဏ်ရာရာများ ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားလျှင် ဖြစ်ပွားချင်း တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်သည် ကန့်ဘလူမြို့သို့ တိုင်းဒေ သကြီး စည်ပင်သာယာရေး ဝန်ကြီးအား လည်းကောင်း၊ ရေဦးမြို့သို့ တိုင်းဒေသကြီး စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးဝန်ကြီးအားလည်းကောင်း စေလွှတ်၍ ကွပ်ကဲဆောင်ရွက်စေ ခဲ့ကြောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး၊ တိုင်းဒေသကြီး တရားသူကြီး၊ တိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေအရာရှိ၊ တိုင်းဒေသကြီး သာသနာရေး ဦးစီးမှူးနှင့် အဖွဲ့သည် ည ၁၁ နာရီ မိနစ် ၅၀ ခန့်တွင် ရွှေဘိုမြို့သို့ ရောက်ရှိပြီး မြို့လုံခြုံရေးကိစ္စများ စီမံဆောင်ရွက်ကာ ယနေ့ နံနက် ၆ နာရီခွဲခန့်တွင် ကန့်ဘလူမြို့မှ တစ်ဆင့် ထန်းကုန်း ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ထို့နောက် အကြမ်းဖက်မှုများ ထပ်မံမဖြစ်ပွားစေရေးအတွက် တိုင်း ဒေသကြီး လုံခြုံရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး၊ နယ်မြေခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ တိုင်း/ခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၊ ခရိုင်/ မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဥက္ကဌများနှင့် တာဝန် ရှိသူများအား အကြမ်းဖက်မှုများ ဆက်လက် မဖြစ်ပွားစေ ရန် အဖွဲ့ငယ်များ ဖွဲ့၍ ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများသို့ ကွင်းဆင်း စည်းရုံးဆောင်ရွက်စေခြင်း၊ ရွာသူရွာသားများနှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့များအား တွေ့ဆုံအားပေးခြင်း၊ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရသည့် ရွာသူရွာသားများအား ယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်း ဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်ရန် စီမံပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယနေ့နံနက်ပိုင်းမှစ၍ နယ်မြေအခြေအနေ ပြန်လည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းသွားပြီဖြစ်ကြောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့က အိမ်ထောင်စု ၅၀ စာ ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်း ၈ မျိုးအား ထန်းကုန်း ကျေးရွာသို့ ပေးပို့ ထောက်ပံ့ရန် စီးစဉ် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်း များကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ယမန်နေ့ည ဖြစ်စဉ်တွင် ပြစ်မှုကျူး လွန်သူ တစ်ဦးနှင့် မီးရှို့ဖျက်ဆီးသူဟု ယူဆရသူ ၁၁ ဦး တို့အား ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်း စစ်ဆေးလျက်ရှိပြီး ဥပဒေချိုးဖောက်သူများအား တရားဥပဒေ နှင့်အညီ အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ (သတင်းစဉ်)
From : ..ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန
လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ပြီးနောက် မြိတ်၌ အကြမ်းဖက်သမား ၃ဦး ဖမ်းမိ
မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခများအား အကြောင်းပြု၍ ပြည်ပနိုင်ငံ များရှိ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ အစည်းများမှ နိုင်ငံတွင်း အဖျက် အမှောက် လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် အကြမ်းဖက် သမား များ စေလွှတ်ထားသည့်သတင်းများရရှိ၍ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း လုံခြုံရေး အထူးမြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ထားရာ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး မြိတ်မြို့ နယ်၌ အကြမ်းဖက်သမား ၃ ဦးအား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး နယ်စပ်ဝင်ပေါက်များ၊ ရေလမ်းကြောင်းများမှ တဆင့်အကြမ်းဖက်သမားများ ၀င်ရောက် လာမည့် သတင်းကို ကြိုတင်သိရှိထား၍ ဖောက်ခွဲရေးသမားများ၏ အမည်နှင့် ဓါတ်ပုံများ အား တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ လုံခြုံရေးအဖွဲ့များထံပေးပို့ထားရာ သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့က မြိတ်ကျွန်း စုရှိ တံငါရွာတစ်ရွာနေရာ၌ ထိုလူများအား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဖမ်းဆီးရမိသူများမှာ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် တရားမ၀င်အလုပ်သွားလုပ်ပြီး မိမိနိုင်ငံသို့ ပြန်လာသည့် မြန်မာလူမျိုးများနှင့် ရော၍ ရေလမ်းကြောင်းမှတဆင့် ၀င်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါသုံးဦးအနက်နှစ်ဦးမှာ မြန်မာနိုင်ငံဖွား ထိုင်းနိုင်ငံသားများဖြစ်ပြီး ကျန်တစ်ဦးမှာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဖွား ထိုင်းနိုင်ငံသားဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အကြမ်းဖက်သမား(၃)ဦးစလုံးမှာ မြန်မာလူမျိုးများကဲ့သို့ မြန်မာစကားကို ကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်သူများဖြစ်သည်။
“အကြမ်းဖက်သမား သုံးယောက် ဖမ်းမိထားတယ်လို့တော့ ကြားတယ်။ ဘယ်ရွာမှာ မိလဲတော့ အတိအကျ မသိဘူးဗျ၊ ကျွန်တော်တို့ တနသာင်္ရီတိုင်းက ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ နယ်မြေ ဆက်စပ်နေတော့ ကုန်းကြောင်းရော ရေကြောင်းကပါ ၀င်လာနိုင်တယ်။ လုံခြုံရေးကိုတော့ အရင်ကထက် တိုးပြီးချထားတာ တွေ့ရတယ်။ ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်း ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သတင်း ရရချင်း သက်ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကို ချက်ချင်းသတင်းပို့သင့်တယ်။”ဟု ကျွန်းစုမြို့နယ်မှ ဒေသခံ ရေလုပ်သား တစ်ဦးက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဖောက်ခွဲရေးသမားများ ၀င်ရောက်လာမည့် သတင်းများကြိုတင်ရရှိထားသဖြင့် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်ချထားရာ မြိတ်မြို့နယ်တွင် အကြမ်းဖက်သမားများ ဖမ်းဆီးရမိခြင်းမှာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။
From : ..မြစ်မခ
ရန်ကုန်မြို့အား ဒလဘက်သို့ တိုးချဲ့မည့် စီမံကိန်းမရှိကြောင်း သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ပြောကြားပြီး သည့်နောက် ဒလမြို့နယ်ရှိ မြေကွက်များ ၀ယ်လက်များလျော့နည်း
ဒလမြို့နယ် ကျန်စစ်သားရပ်ကွက် အတွင်းပိုင်း မြေနေရာအား တွေ့ရစဉ်
ယခုအစိုးရ လက်ထက်တွင် ရန်ကုန်မြို့အား ဒလဘက်သို့ တိုးချဲ့မည့် စီမံကိန်း မရှိကြောင်း သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းက နေပြည်တော်ရှိ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနတွင် ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စုအဆင့် ၀န်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူများနှင့် မီဒီယာများ တွေ့ဆုံပွဲတွင် မြေဈေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်ကာ သတင်းထောက်များ၏ မေးမြန်းမှုအပေါ် ယခုကဲ့သို့ ဖြေကြားခဲ့သည်။ ဒလဘက်ခြမ်းရှိ မြေဈေးနှုန်းများမှာ ရန်ကုန်-ဒလ မြစ်ကူးတံတား စီမံကိန်းကြောင့် ဈေးနှုန်းများ အဆမတန် မြင့်တက်ခဲ့ပြီး ယခုလက်ရှိတွင် မြင့်တက်ဈေးနှုန်းများမှာ ထပ်မံကျဆင်းခြင်း မရှိသော်လည်း သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ပြောကြားပြီးနောက် ၀ယ်လက်များ လျော့နည်းနေကြောင်း ဒလမြို့နယ်ရှိ အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်များမှ စုံစမ်းသိရသည်။
ထိုသို့ ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်နေသော်လည်း ၀ယ်မည့်သူမှာ မရှိဘဲ တံတားစီမံကိန်း၏ အချက်အချာကျသော နေရာများဖြစ်သည့် ကမာကဆစ် ရပ်ကွက်တွင်မူ ရောင်းသူမှ ယခုလက်ရှိဈေးထက် ပိုမိုမြင့်တက်လာအောင် ဈေးဆွဲခေါ်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
တံတားစီမံကိန်းနှင့် နီးစပ်သည့် ကျန်စစ်သား ရပ်ကွက်တွင်လည်း ယခင်မြင့်တက်ခဲ့သော ဈေးနှုန်းမှ ဈေးအနည်းငယ် ကျဆင်းသွားခဲ့ပြီး ၀ယ်လက်မရှိဘဲ အရောင်းအ၀ယ် အေးနေကြောင်း သိရသည်။
ဒလဘက်ခြမ်းရှိ မြေဈေးနှုန်းများမှာ လမ်းမတန်းတွင် ယခင်က သိန်းရာဂဏန်းသာ ရှိရာမှ ယခုအခါတွင် သိန်းထောင်ဂဏန်း ၀န်းကျင်အထိ မြင့်တက်ခဲ့ပြီး အတွင်းပိုင်းရှိ မြေနေရာများမှာမူ သိန်းဆယ်ဂဏန်း ၀န်းကျင်မှ သိန်းရာဂဏန်း ကျော်အထိ ဈေးများ အဆမတန် မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဒလမြေပိုင်ရှင်များမှာ ဈေးမြှင့်တင် ခေါ်ယူမှုများ ရှိနေသော်လည်း လက်ရှိတွင် ၀ယ်လက် ကျဆင်းလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်-ဒလ မြစ်ကူးတံတား စီမံကိန်းကို ကိုရီးယား သမ္မတနိုင်ငံမှ ၂၀၁၄ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် စတင်အကောင် အထည်ဖော်မည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာပြီးသည့် နောက်ပိုင်းတွင် ဒလမြေဈေးနှုန်းများ အဆမတန် မြင့်တက်ခဲ့သည်။ ယခုအခါတွင် ရန်ကုန်မြို့အား ဒလဘက်သို့ တိုးချဲ့မည့် စီမံကိန်းမရှိဟူသော သတင်းကို သိရှိသော ပြည်သူများမှ ဒလဘက်တွင် မြေ၀ယ်မည့် အစီအစဉ်များ ပြန်လည်ဆိုင်းငံ့ ထားခြင်းများ ရှိလာကြောင်း သိရသည်။ ထို့ကြောင့် မြင့်တက်လျက်ရှိသော ဒလအိမ်ခြံ မြေဈေးနှုန်းများမှာ ပြန်လည်ကျဆင်း လာဖွယ်ရှိကြောင်း အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်များက သုံးသပ်သည်။
''ကျွန်မက တံတားထိုးမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကြားတော့ ဒလဘက်မှာ မြေ၀ယ်ဖို့ စုံစမ်းနေတာ။ ဒါပေမဲ့ ဈေးက မတရား မြင့်တက်နေတော့ မ၀ယ်သေးဘဲ အခြေအနေ စောင့်ကြည့်နေတာ။ ဒီရက်ပိုင်းမှာ ၀ယ်လက်တွေ မရှိဘဲနဲ့ ဈေးကမကျဘူး ဖြစ်နေတယ်။ အခုဒလကို ရန်ကုန်မြို့အဖြစ် တိုးချဲ့မယ့် အစီအစဉ် မရှိဘူးဆိုတာ ဂျာနယ်မှာ ဖတ်လိုက်ရတော့ မ၀ယ်တော့တာပါ။ အခုလို ဒလမှာ ဈေးမြင့်နေတာက ရန်ကုန်ရဲ့ သွားလာရ လွယ်တဲ့နေရာမှာတောင် ရနေတာကို ဘာလို့ဝယ်တော့မှာလဲ'' ဟု ဒလမြို့ဘက်သို့ မြေ၀ယ်ရန် စုံစမ်းနေသူက ဆိုသည်။
ရေလွှမ်းမိုးမှုကို ကာကွယ်ပေးမည့် လန်ဒန်မှ ဒေါင်လိုက်ဥယျာဉ်
ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ လန်ဒန်မြို့တော်တွင် နိုင်ငံ၏ အရွယ်အစား အကြီးမားဆုံး ဒေါင်လိုက်ဥယျာဉ် တစ်ခုကို ဖန်တီးစိုက်ထူထားကြောင်း သိရှိရသည်။ ဗစ်တိုးရီးယား ဘူတာအနီးတွင် ထားရှိပြီး Living Wall ဟု အမည်ပေးထားသော ဒေါင်လိုက် ဥယျာဉ်သည် မြင့်မားသော နံရံချပ်ကြီးတွင် ဆောက်လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ (၆၈)ပေ အမြင့်ရှိသော ဒေါင်လိုက် ဥယျာဉ်ကြီးတွင် အပင်ပေါင်း (၁၀၀၀၀)ကျော်ကို စိုက်ပျိုးထားသည်။ ထို့အပြင် သဘာဝ ရေစုပ်ယူ စနစ်ကိုပါ ထည့်သွင်း တည်ဆောက်ထားပြီး ယင်းသည် သစ်ပင်လေးများ စိမ်းလန်းနေအောင် ရေဓာတ် ဖြည့်တင်းပေးမည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဒေါင်လိုက် ဥယျာဉ်သည် မျက်စိပသာဒဖြစ်ရုံ ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုတည်းဖြင့် တည်ဆောက်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ အနာဂတ်ကာလတွင် လန်ဒန်မြို့တော် အလယ်ပိုင်းကို ရေလွှမ်းမိုးမှုများ မဖြစ်စေအောင် ကာကွယ်ပေးရန်လည်း ရည်စူးထားသည်။
မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းသော ကာလများတွင် ဖန်းသစ်ပင်လေးများနှင့် နှစ်ရှည်ခံ ဆေးပင်များအတွက် ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးရန် ဆောက်လုပ်ထားသော သဘာဝ ရေလှောင်စနစ်က မိုးရေကို ပမာဏ များပြားစွာ ခံယူပေးထားမည်ဟု သိရသည်။ အဆိုပါ နံရံကပ် ဥယျာဉ်ကြီးတွင် စတော်ဘယ်ရီ၊ ကံကုမံ၊ ကြွေပန်းတို့ အပါအဝင် အပင်ငယ်မျိုးနွယ် (၂၀)ကျော်ကို စိုက်ပျိုးထားသည်။ အဆိုပါ သစ်ပင်လေးများ စိုက်ပျိုးထားရန်အတွက် သဲ(၁၆)တန်ကို နံရံထဲတွင် ထည့်မြှုပ်ထားပြီး ယင်းသည် မိုးရေ လီတာ တစ်သောင်းကျော်ကို စုပ်ယူပေးထားနိုင်ကြောင်း ပညာရှင်များက ဆိုသည်။
ဗြိတိန် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် အေဂျင်စီက လန်ဒန်ရှိ သိမ်းစ်မြစ်ကြီး နံဘေးမှ အိမ်ခြေ (၅၃၄၀၀၀)မျှသည် ရေကြီးနိုင်သော အခြေအနေမျိုး အချိန်မရွေး ကြုံလာနိုင်ကြောင်း တွက်ချက်ထားသည်။ ယခု ဒေါင်လိုက် ပန်းခြံ စီမံကိန်းကို လန်ဒန်မြို့တော်ဝန် ဘောရစ်ဂျက်ဆင်က အဓိက ကမကထပြု အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ မြို့တော်ဝန်၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ အကြံပေး မက်သရူး ပန်ချားဇ်က "လန်ဒန်မှာ သစ်ပင်၊ ပန်းခြံ၊ ဥယျာဉ်တွေ ပေါပေါများများ ရှိနေတာရယ်၊ ခုလိုမျိုး အမိုးနဲ့ နံရံ ဥယျာဉ်တွေ ပေါများလာတာရယ် ဆိုရင်တော့ ပြင်းထန်တဲ့ ရာသီဥတုကို သဘာဝအတိုင်း တုံ့ပြန်နိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ယူဆထားပါတယ်"ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုဒေါင်လိုက် ဥယျာဉ် နံရံကြီး၏ ဒီဇိုင်းကို Green Roof အကြံပေး လီမိတက်က ရေးဆွဲပေးပြီး TreeBox လီမိတက်က တပ်ဆင်ခဲ့သည်။ စိုက်ပျိုးသည့် သစ်ပင်များသည် ဥတုရာသီမရွေး ဖူးပွင့်နိုင်သည့် အမျိုးအစားများကို ရွေးချယ်ထားပြီး ငှက်များ၊ လိပ်ပြာများနှင့် ပျားများကို သဘာဝဆန်ဆန် ဆွဲဆောင်နိုင်ရန် မျှော်လင့်ထားကြောင်း သိရှိရသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း ကန့်ဘလူမြို့နယ် ထန်းကုန်းရွာက အမျိုးသမီးတဦးကို မွတ်ဆလင် အမျိုးသား တဦးက ဆွဲလား ရမ်းလား လုပ်ခဲ့တဲ့ အတွက် လူမျိုးရေး ဘာသာရေး နွယ်တဲ့ ပဋိပက္ခတခု မနေ့က ဖြစ်ပွားရာ၊ အိမ်ခြေ ၅၀ လောက် ပျက်စီး သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်သဖြစ်နေတဲ့ ရာနဲ့ချီတဲ့ လူအုပ်တွကနေ မွတ်ဆလင် နေအိမ်တွေ ဆိုင်ခန်းတွေကို ဖျက်ဆီးမီးရှို့ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ရဲကနေ သေနတ်ပစ်ဖေါက် လူစုခွဲခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မီးရှို့သူ ၁၁ ဦးကို ရဲက ဖမ်းဆီးထားပြီး၊ အမျိုးသမီးကို ဆွဲလား ရမ်းလား လုပ်ခဲ့တဲ့ မွတ်ဆလင် အမျိုးသားကိုလည်း ရဲက ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။
မည်သည့် နိုင်ငံတွင်မှ မရှိသည့် ယာယီနိုင်ငံသားကတ် (၀ှိုက်ကတ်) ကိုင်ဆောင်ထားသူများကို မဲပေးခွင့်၊ ပါတီထောင်ခွင့်ပြုခြင်း ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာ အာဏာကို ထိပါးနိုင်သည်အထိ ဖြစ်စေနိုင်ဟု နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ဝေဖန်
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးနေသူ အချို့ကို တွေ့ရစဉ်
မည်သည့် နိုင်ငံတွင်မှ မရှိသည့် ယာယီနိုင်ငံသားကတ် (၀ှိုက်ကတ်) ကိုင်ဆောင်ထားသူများကို မဲပေးခွင့်၊ ပါ တီထောင်ခွင့်ပြုခြင်း ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာ အာဏာကို ထိပါးနိုင်သည်အထိ ဖြစ်စေနိုင် သည်ဟု နယ်ပယ် အသီးသီးမှ ဝေဖန်မှုများ ရှိနေသည်။
အဆိုပါ ၀ှိုက်ကတ်များကို ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးများအား ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို ထောက်ခံမဲပေးနိုင်ရန် ယခင် စစ်အစိုးရ လက်ထက်က ထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ၀ှိုက်ကတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူဦးရေ ငါးသိန်းကျော် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ယာယီနိုင်ငံသားကတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူများကို ပါတီထောင်ခွင့် ပေးထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သြဂုတ် ၂၃ ရက်က အမျိုးသား လွှတ်တော်တွင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာအေးမောင်က နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေပါ နိုင်ငံသား သတ်မှတ်ချက်ကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်း တင်သွင်းမှုကို အာဏာရ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှဆွေက ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေနှင့် မညီဟုဆိုကာ ကန့်ကွက်ခဲ့သောကြောင့် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရန် ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့သည်။
ယင်းကဲ့သို့ ကန့်ကွက်ခြင်းမှာ အမျိုးသားရေးအတွက် လုံးဝမလုပ်သင့်ဘဲ အာဏာရပါတီ တစ်ခုအနေဖြင့် အမျိုးသားရေး အပေါ်တွင် မထောက်မထား၊ မငဲ့ကွက်ဘဲ မိမိပါတီ အနိုင်ရရေးကိုသာ လုပ်ဆောင် နေသည်ဟု ထင်မိကြောင်းနှင့် အခြားနိုင်ငံများတွင်လည်း ယာယီကတ်ဖြင့် မဲပေးခွင့်ပင် မရကြောင်း ရခိုင်ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသာအောင်က ပြောကြားသည်။
ဦးအေးသာအောင်က ''အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ Green Card ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ဒါက နေထိုင်ခွင့်ပေါ့။ အဲဒီလို နေထိုင်ခွင့် ရဖို့တောင်မှ သူတို့မှာ စည်းကမ်းတွေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ အများကြီးကို ကျော်ဖြတ်ပြီးမှ ရတာပါ။ အဲဒီကတ် ရပေမယ့် မဲရွေးပိုင်ခွင့်၊ မဲပေးခွင့်လုံးဝ မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ ၀ှိုက်ကတ် ကိုင်ထားတဲ့ သူတွေက မဲပေးခွင့် ရှိတယ်။ ပါတီထောင်ခွင့်ရှိတယ် ဆိုတာက ဒီလက်ထက်မှာမှ ကြားဖူးတာ။ ၀ှိုက်ကတ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ကြားတောင် မကြားဖူးဘူး။ အဲဒီတော့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မိမိပါတီ အနိုင်ရဖို့အတွက် ဒီလိုလုပ်ခဲ့ တာကတော့ ဥပဒေနဲ့လည်း မညီဘူး။ အမျိုးသားရေး အတွက်၊ ရှေ့ရေး အတွက်လည်း အင်မတန်မှ ရင်လေးစရာ ကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်လို့ ပြောချင်တယ်။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ လုံခြုံရေး အရပဲ ကြည့်ကြည့်၊ အမျိုးသားရေး အရပဲ ကြည့်ကြည့် ဒီလိုမျိုးလုံးဝ မလုပ်သင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်'' ဟု ဆိုသည်။
''ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆို နိုင်ငံသား တစ်ယောက်ဟာ နိုင်ငံကို သစ္စာစောင့်သိမှု ရှိနေပြီလားဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက် တစ်ခုတော့ ရှိတယ်။ နိုင်ငံသား ဖြစ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီနေ့အထိ ပြောနေကြတယ်။ အငြင်းအခုံတွေ ဖြစ်နေကြတယ်။ နိုင်ငံသား ဖြစ်ခြင်းနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး နိုင်ငံတော် အာဏာအထိ တက်လှမ်းလာမယ် ဆိုရင်တော့ နိုင်ငံသား ဖြစ်ခြင်းရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ အရေးကြီးတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် တိုင်းပြည်ကို တကယ် သစ္စာစောင့်သိ ရိုသေတဲ့ နိုင်ငံသား ဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်'' ဟု ၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့ အဖွဲ့အစည်းမှ ဦးဂျင်မီက ဆိုသည်။
၀ှိုက်ကတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူ များမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော ဒေသများတွင် အဓိက ရှိနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် လာရောက် နေထိုင်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုသည့် အနေဖြင့် ယာယီအားဖြင့် ထုတ်ပေးထားသည့် လက်မှတ် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပါတီနိုင်ငံရေးသည် စနစ်ကျပြီး လျော့တိလျော့ရဲ လုပ်၍မရသည့် အတွက် ယာယီ အဆင့်လောက်ဖြင့် လုပ်ခြင်းသည် မည်သို့မှ အကျိုးရှိမည် မဟုတ်ကြောင်းနှင့် ယင်းကဲ့သို့သာ ခွင့်ပြုပေးလိုက်မည် ဆိုပါက ရှုပ်ထွေးမှုများစွာ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း ချင်းအမျိုးသား ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇိုဇမ်က ပြောကြားသည်။
လူဦးရေသန်း ၁၆၀ လောက်ရှိနေတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၊ အဲဒီအပေါ်မှာ သန်း ၁၂၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ အရှေ့ဘက်မှာ သန်း ၁၃၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံတွေရှိတယ်။ ဒီလောက် လူဦးရေ ပေါက်ဖွားနှုန်း ဒီလောက် မြင့်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေကြားမှာ နစ်နေတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဟာ ဒါမျိုး ၀ှိုက်ကတ်တွေ၊ သုံးခေါက်ချိုးတွေနဲ့ မဲပေးခွင့်၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့် ပေးလိုက်ရင် လာမယ့် နှစ် ၅၀၊ ၁၀၀ အတွင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သမ္မတက...
''ယာယီ နိုင်ငံသား လက်မှတ် ကိုင်ထားတဲ့ သူတွေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်မယ်ဆိုရင် ယာယီသမားတွေ အများကြီး ပေါ်ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ ယာယီနိုင်ငံသား လက်မှတ် ကိုင်ထားတဲ့သူတွေ နိုင်ငံသား ဖြစ်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ကြိုးစားပေါ့။ အဲဒီတော့မှ နိုင်ငံရေးလုပ်ပေါ့။ ကျွန်တော့် အမြင်ကတော့ ယာယီနဲ့ကတော့ ဘာမှမလုပ်တာ အကောင်းဆုံးပဲလို့ သုံးသပ်ချင်တယ်'' ဟု ဦးဇိုဇမ်က ဆိုသည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူ့အခွင့်အရေး အမြင့်ဆုံးဟုပြောသည့် အမေရိကန် နိုင်ငံတွင်ပင် နိုင်ငံသား မဟုတ်ပါက မဲပေးခွင့် မရှိကြောင်း၊ အနောက် နိုင်ငံများ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူ့အခွင့်အရေး မရှိဟုသာ ပြောနေ ကြသော်လည်း အမေရိကန်မှ Green Card ထက်ပင် နိမ့်သည့် ၀ှိုက်ကတ်ဖြင့် မဲပေးခွင့်၊ နိုင်ငံရေးပါတီ ထောင်ခွင့်များ ပေးထားသည် ဆိုခြင်းမှာ နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းအရ ဆိုပါက မှားနေသည်ဟု ဆိုနိုင်ကြောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ရေးရာဝန်ကြီး ဦးဇော်အေးမောင်က ပြောကြားသည်။
''ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထ၀ီနိုင်ငံရေးအရ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနောက်ဘက်မှာ မကွေးတိုင်းသာသာ လောက်ပဲရှိပြီး လူဦးရေသန်း ၁၆၀ လောက်ရှိနေတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၊ အဲဒီအပေါ်မှာ သန်း ၁၂၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ အရှေ့ဘက်မှာ သန်း ၁၃၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံတွေရှိတယ်။ ဒီလောက် လူဦးရေ ပေါက်ဖွားနှုန်း ဒီလောက် မြင့်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေကြားမှာ နစ်နေတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဟာ ဒါမျိုး ၀ှိုက်ကတ်တွေ၊ သုံးခေါက်ချိုးတွေနဲ့ မဲပေးခွင့်၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့် ပေးလိုက်ရင် လာမယ့် နှစ် ၅၀၊ ၁၀၀ အတွင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သမ္မတက တိုင်းတစ်ပါးသား ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဒါကို နားမလည်ဘဲ လက်တစ်ဆစ်လောက်၊ မျက်တောင်မွှေးလောက်ပဲ ကြည့်ပြီး ကန့်ကွက်လိုက်တာဟာ အင်မတန် ၀မ်းနည်းဖို့ ကောင်းတယ်'' ဟု ဦးဇော်အေးမောင်က ပြောကြားသည်။
''နိုင်ငံသား အခွင့်အရေး မှန်သမျှကို White Card ကိုင်တဲ့သူက ခံစားခွင့် ရှိတယ် ဆိုတာတော့ လ၀က က ပြန်စိစစ် သင့်တယ်။ ဥပဒေမှာလည်း ယာယီနိုင်ငံသား ဆိုတာ မရှိဘူး။ နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံခြားသား ဆိုတာမျိုးပဲ ရှိတယ်။ တကယ်က White Card ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မရှိသင့်ဘူး။ နိုင်ငံသား မဟုတ်ဘဲနဲ့ နိုင်ငံသား အခွင့်အရေးတွေ ပေးတယ်ဆိုတာ ဒါဥပဒေ ချိုးဖောက်တာပဲ။ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး ဘယ်ကိစ္စပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့၊ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရေးမှာ ဒီလိုပါဝင်ခွင့် ပေးရင် ဒါဟာ ပေးတဲ့သူတွေ ဥပဒေ ချိုးဖောက်တာပေါ'' ဟု တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးကျော်ဟိုးက ဝေဖန်ပြောကြားသည်။
အဖြူကတ် ဆိုသည်မှာ ထုတ်ကို မထုတ်ပေးသင့်သည့် စနစ်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံသား အားလုံးသည် ပန်းရောင်ကတ် ဆိုပါက ပန်းရောင်ကတ်သာ ဖြစ်သင့်ပြီး မဲထည့်ရန် ယာယီအတွက် အဖြူကတ် ဆိုသည်ကို မထုတ်သင့်ကြောင်း၊ မဲပေးသင့်သည့် သူသည် နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် ရှိသည်ဆိုပါက ၎င်းကို ပန်းရောင်ကတ် တစ်ခါတည်း ထုတ်ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံသားကတ် ပန်းရောင်ကတ် ရသင့်သလား ဆိုသည်မှာမူ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် ဥပဒေဖြင့် ညှိရမည် ဖြစ်ကြောင်း ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး ကွန်ရက်မှ ဒေါ်ခွန်ဂျာက ပြောကြားသည်။
''လောလောဆယ် နိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့် ဥပဒေက ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေ ရှိနေတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောတာကို ကျွန်မ သဘောတူပါတယ်။ နိုင်ငံသား ဥပဒေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ပြုပြင်မွမ်းမံဖို့ လိုတယ်။ တချို့သော လူမျိုးတွေကျတော့ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် နေရင်လည်း နိုင်ငံသား မဖြစ်လာဘူး။ ဥပမာ တရုတ်တွေက မနေ့ကမှ ၀င်လာတယ်။ ချက်ချင်း နိုင်ငံသား ကတ်ရတယ်။ ဒါဟာ Fair မဖြစ်ဘူး။ ဒါတွေကို လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေ၊ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် ဥပဒေနဲ့ ဖြေရှင်းရမှာပေါ့။ စံချိန်တစ်ခုကို သတ်မှတ်ထားရမှာပေါ့။ နိုင်ငံတကာ စံချိန်နဲ့လည်း Date မအောက်အောင် အဲဒါမျိုး ဖြစ်သင့်ပါတယ်'' ဟု ဒေါ်ခွန်ဂျာက သုံးသပ်သည်။
''နိုင်ငံသား မဟုတ်တဲ့ သူတွေက White Card ကိုင်ဆောင်ထားပြီး မဲပေးခွင့်ရထားတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်ကတော့ သဘောမတူပါဘူး။ ဧည့်နိုင်ငံသားလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ သူတွေကို မဲပေးခွင့်၊ ပါတီထောင်ခွင့် ပေးထားတဲ့နိုင်ငံ ကမ္ဘာမှာ မရှိပါဘူး။ ပေးစရာ အကြောင်းလည်း မရှိပါဘူး။ သူများအိမ်ကို အလည်ရောက်နေတဲ့ သူစိမ်းတစ်ဦးဟာ သူတစ်ပါး အိမ်တွင်းရေး ကိစ္စတွေကို ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ဖို့ မလိုအပ်သလို ၀င်ရောက် နေရာယူဖို့လည်း မကြိုးစား သင့်ပါဘူး။ နိုင်ငံသား မဟုတ်သူတွေ ပါတီထောင်ခွင့်၊ မဲပေးခွင့်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံလို ခေတ်ပြောင်း စနစ်ပြောင်းနဲ့ လမ်းသစ်ဖောက်နေတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခု အနေနဲ့ ပိုလို့တောင် ကြပ်မတ်သင့်ပါတယ်။ တစ်ပါတီ စနစ်ကနေ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို ပြောင်းလဲခါစ နိုင်ငံတွေမှာ ပါတီတွေ အရမ်းပေါလာပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာတောင် ပါတီတွေများနေတာ။ ဧည့်သည်ကပါ ပါတီထောင်ဖို့ ကြံလာမယ်ဆိုရင် သိပ်ပြီး အဆင်မပြေ လှပါဘူး။ ဧည့်နိုင်ငံသားလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ သူတွေကို ပါတီထောင်ခွင့် ပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးကိုပဲ ဦးတည်လာဖို့ များနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံသား တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ဗဟိုအစိုးရအပေါ် ယုံကြည်ကိုးစားမှုပါ လျော့နည်းလာစေ နိုင်တယ်လို့ မြင်မိပါတယ်'' ဟု တပ်မတော် အရာရှိ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၌ ၀ှိုက်ကတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူများကို မဲပေးခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ယင်းဒေသများ၌ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီမှ အမတ်များ အနိုင်ရရှိခဲ့ရာ လက်ရှိတွင် ၎င်းတို့အား နိုင်ငံသား ဖြစ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ၀န်ကြီးဌာနမှ စစ်ဆေးမှုများ ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
မိခင်ဖြစ်သူနှင့်အတူ အိပ်နေသော ကလေးတစ်ဦး ရေထဲသို့ ပြုတ်ကျသေဆုံး
မိခင်ဖြစ်သူနှင့်အတူ အိပ်နေသော ဆယ်လသားအရွယ် ကလေးငယ်တစ်ဦး အိမ်ထရံကြားမှ ထွက်ကျကာ ရေထဲသို့ ပြုတ်ကျသေဆုံးမှု သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့ နံနက် ၇ နာရီက ဒလမြို့နယ် မှော်စက်ရပ်ကွက် အောင်သပြေ လမ်းရှိ နေအိမ်တစ်လုံးတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဒလမြို့နယ်၊ မှော်စက်ရပ်ကွက် အောင်သပြေလမ်း တွင် နေထိုင်သော ဦးကျော်ဝင်းလွင်နှင့် ဒေါ်မိုးမိုးအေးတို့သည် ဆယ်လသားအရွယ်ရှိ မောင်နိုင်လင်းထွန်းနှင့်အတူ ည ၂ နာရီခန့်က အိပ်ရာဝင်ခဲ့ရာ နံနက်အိပ်ရာထချိန်တွင် မိခင်ဖြစ်သူသည် ကလေးကို မတွေ့ရှိရ၍ ရှာဖွေရာ အိမ်အောက်ရှိ ရေထဲသို့ ပြုတ်ကျ သေဆုံးနေသည် ကို တွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း အဆိုပါ မှော်စက်ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်ကျော်က The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
“အမျိုးသားက မနက် ၅ နာရီလောက်က အလုပ်ထသွားတာပါ၊ အဲဒီအချိန်လောက်ထိ ရှိနေသေးတယ်လို့ ပြောတယ်။ အဲဒါ မနက် ၇ နာရီလောက် အမေဖြစ်သူ အိပ်ရာကနိုးတော့ ကလေးမတွေ့လို့ လိုက်ရှာတော့ အိမ်အောက်ရေထဲက တွေ့တယ်လို့ ပြောတယ်ဟု” ၎င်းက ဆိုသည်။
အဆိုပါနေအိမ်တွင် လေဖြတ်ပြီး ကျန်းမာရေး မကောင်းသော အဘိုးတစ်ဦးရှိပြီး ညဘက်တွင် ကျန်းမာရေး ပြုစုရခြင်းကြောင့် အိပ်ရေးပျက်သဖြင့် အိပ်ပျော်သွားကြောင်း၊ ကလေးသည် အိပ်ရာ မှနိုးပြီး လေးဖက်တွား လျှောက်သွားရင်း အနားကွပ်မရှိသည့် အိမ်ခေါင်းရင်း ထရံကြားမှ ပြုတ်ကျသွားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ အိမ်အောက်ရှိ ရေများ သည် မြေနိမ့်ပိုင်း ဖြစ်သဖြင့် မိုးတွင်းကာလတွင် ရေဝပ်လေ့ ရှိကြောင်း အဆိုပါ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ထပ်မံပြောကြားသည်။
“အိမ်အောက်ရေက တစ်ပေလောက် နက်တယ်။ ကလေးကို ရေထဲမှာ လိုက်ရှာရတယ်၊ ရုတ်တရက်ဆို မတွေ့ရဘူး။ မှုခင်း ဆရာဝန်ရဲ့ ပြောပြချက်အရကလေးရဲ့ အဆုတ်ထဲမှာ ရွှံရေတွေ ဝင်နေတယ်လို့ စစ်ဆေးတွေ့ရှိရတယ်” ဟု ဒလမြို့နယ် ရဲစခန်းမှ ဒုရဲအုပ် ထူးနိုင်ဝင်းက ပြောသည်။